2daty Bokin 'i Samoela – 2trondro
Home / Baiboly / Testamenta Taloha / 2daty Bokin 'i Samoela
1:1 Ary nitranga fa, rehefa maty Saoly, David niverina avy namono ny Amalekita, ka dia nijanona roa andro tao Ziklaga.
1:2 Avy eo, amin'ny andro fahatelo, olona niseho, tonga avy any amin'ny tobin'i Saoly, amin'ny rovitra ny fitafiany, ary vovoka ny lohany natopiny teo. Ary rehefa tonga teo amin'i Davida, dia niankohoka, ary izy ka hajaina.
1:3 Ary hoy Davida taminy:, "Taiza ianao avy?"Ary hoy izy taminy:, "Efa lasa nandositra niala tamin'ny tobin'ny Isiraely izy."
1:4 Ary hoy Davida taminy:: "Inona no teny izay nitranga? Manambara izany amiko. "Ary hoy izy:: "Ny olona nandositra tamin'ny ady, ary maro tamin 'ny olona efa lavo ka maty. Koa, Saoly sy Jonatana zanany efa lasa. "
1:5 Ary hoy Davida tamin'ny tanora izay tatitra ho azy, "Ahoana no ahafantaranao fa Saoly sy Jonatana zanany efa maty?"
1:6 Ary ny tanora, izay tatitra izany ho azy, nanao hoe:: "Izaho tonga ho azy teo an-tendrombohitra Gilboa. Ary Saoly nandry tamin'ny lefony. Ary ny kalesy sy mpitaingin-tsoavaly nanatona azy.
1:7 Ary nitodika ao ambadiky ny lamosiny ka nahita ahy, dia niantso ahy. Ary rehefa efa namaly, "Inty aho,"
1:8 dia hoy izy tamiko, "Iza ianao?"Ary hoy aho taminy, "Amalekita aho."
1:9 Ary hoy izy tamiko: "Mijoroa ahy, ka vonoy aho. Fa Fahoriana no mahazo ahy, ary mbola ny fiainany manontolo ato anatiko. "
1:10 Ary nitsangana teo azy, I namono azy. Fa fantatro fa tsy afaka ho velona araka ny fahalavoana. Ka dia nalaiko ny diadema teo amin'ny lohany, Ary ny fehin-tànana avy amin'ny sandriny, ka nentiko etỳ aminao, tompoko. "
1:11 Ary Davida, mihazona ny fitafian'i, nanapatapaka, ny olona rehetra izay nomba azy.
1:12 Ary nisaona, ary nitomany, sy nifady hanina mandra-paharivan'ny andro, an'i Saoly sy Jonatana zanany, ary ny tonian'ny ny vahoakan 'ny Tompo ary ny tonian'ny mpianakavin' i Isiraely, satria efa lavo tamin-tsabatra.
1:13 Ary hoy Davida tamin'ny tanora izay efa nilaza izany taminy, "Avy aiza ianao?"Dia namaly, "Izaho no zanaky ny lehilahy iray vaovao fahatongavan'ireo Avy tany amin'ny Amalekita."
1:14 Ary hoy Davida taminy:, "Nahoana ianareo no tsy natahotra haninjitra ny tananao, mba ho hamono ny Kristy 'ny Tompo?"
1:15 Ary niantso ny mpanompony anankiray, Ary hoy Davida, "Ho mby akaiky ka mihazakazaka hamely azy" Dia namely azy, dia maty izy.
1:16 Ary hoy Davida taminy:: "Ny ràny dia ho lohanao ihany. Fa ny vavanao ihany no efa niteny hamely anao, nanao hoe:: 'Efa namono ny Kristy Tompo.' "
1:17 Ary Davida nisaona hira fahalahelovana an'i Saoly sy Jonatana zanany, amin'izao fomba izao.
1:18 (Ary nandidy mba nampianarina ny taranak'i Joda ny tsipìka, araka ny voasoratra ao amin'ny Boky + Momba ny marina.) Ary hoy izy:: "Diniho, Ry Isiraely, ho an'ny olona efa maty, naratra eo amin 'ny avo:
1:19 Ny malaza ny Isiraely no maty eo amin 'ny tendrombohitra. Ahoana no mety ho lavo ny mahery fo?
1:20 Aza misafidy ny hanambara izany amin'ny Gata, ary aza manambara izany ao amin'ny sampanan-dalana an'i Askelona. Raha tsy izany, ny zanakavavin'ny Filistina mba hifalianareo; raha tsy izany, ny zanakavavin'ny tsy mifora mba hiravoravo.
1:21 Ry tendrombohitry ny Gilboa, aoka tsy ando, na orana latsaka noho ny aminao, ary enga anie izany tsy ho ny saha momba ny voaloham-bokatra. Fa amin 'izany toerana, ny ampingan'ny mahery fo, dia natsipy ilay izy, Dia ny ampingan'i Saoly, toy ny hoe tsy nohosorana diloilo.
1:22 Avy amin'ny ran'ny voavono, avy ny saboran'ny ny matanjaka, ny zana-tsipìka Jonatana tsy niverina, ary ny sabatr'i Saoly tsy mba niverina foana no.
1:23 Saoly sy Jonatana, mendrika ny ho tia, sy marevaka eo amin'ny fiainany: na dia ny fahafatesana dia tsy voazarazara. Izy ireo, faingana noho ny voromahery, mahery noho ny liona.
1:24 Ry zanakavavin'i Israely, mitomania an'i Saoly, izay niakanjo jaky anareo amin'ny ravaka, dia nitondra fanatitra ny firava-bolamena ny haingonareo.
1:25 Ahoana no mety ho lavo ny mahery an 'ady? Ahoana no Jonathan no novonoina tamin'ny avo?
1:26 I malahelo anareo, ry Jonatana rahalahiko: izaitsizy tokoa marevaka, ary mendrika ny hotiavina mihoatra noho ny fitiavan'ny vehivavy. Amin'ny maha-reny tia ny zanany lahitokana, toy izany koa no tiako ianao.
1:27 Ahoana no mety ho lavo ny matanjaka, ary ny fitaovam-piadiana no maty?"
2:1 Ary noho izany, Rehefa afaka izany,, Davida naka hevitra ny Tompo, nanao hoe:, "Va aho hiakatra ho iray amin'ireo tanànan'i Joda?"Ary hoy Jehovah taminy, "Niakatra." Ary hoy Davida, "Ho aiza no hiakatra?"Ary Jesosy namaly azy, "Any Hebrona."
2:2 Noho izany, Davida no niakatra tamin'ny vadiny roa, Ahinoama, Jezirelita, ary Abigaila, ilay novinadin'i Nabala Karmelita.
2:3 Fa ny amin'ny olona izay nomba azy, David nitondra samy niaraka tamin'ny ankohonany. Dia nitoetra tao amin'ny tanàna momba an'i Hebrona izy.
2:4 Ary ny lehilahy amin'ny Joda ka nanosotra an'i Davida nandeha tao, ka dia izy no hanjaka amin'ny taranak'i Joda. Ary nisy nilaza tamin'i Davida fa ny lehilahy amin'ny Jabesi-gileada no nandevina an'i Saoly.
2:5 Noho izany, Davida naniraka olona nankany amin'ny mponina ao Jabesi-gileada, ary hoy izy taminy: "Sambatra ianao ho an'ny Tompo, izay efa vita izany famindram-po amin'ny Tompo Saoly, mba ho handevina azy.
2:6 Ary ankehitriny, Azo antoka fa, ny Tompo no hamaly anao famindram-po sy ny fahamarinana. Fa Izaho kosa dia hanao zavatra fankasitrahana, satria efa nahavita izany teny izany.
2:7 Aoka hatanjaka ny tananareo, ary ho zanaky ny herimpo. Fa na dia tomponao maty Saoly, Mbola ny taranak'i Joda efa nanosotra ahy ho mpanjakany. "
2:8 Ary Abnera, ny zanak'i Nera, ny mpitarika ny tafik'i Saoly, efa naka an'Isboseta, ny zanak'i Saoly,, Ary nitondra Azy manodidina, eran'ny toby.
2:9 Ary izy nanendry azy ho mpanjakan'ny Gileada, ary ny Gesorita, ary ny Jezirela, ary ny Efraima, sy ny Benjamina, ary ny Isiraely rehetra.
2:10 Isboseta, ny zanak'i Saoly,, efa-polo taona rehefa nanomboka ho mpanapaka ny Isiraely. Ary nanjaka roa taona. Fa afa-tsy ny firenen'i Joda nomba an'i Davida.
2:11 Ary ny isan'ny andro, mandritra izany fotoana izany i Davida nitoetra na hanapaka ao amin'ny Hebrona tamin'ny taranak'i Joda, dia fito taona sy enim-bolana.
2:12 ary Abnera, ny zanak'i Nera, ary ny tanora ny Isboseta, ny zanak'i Saoly,, dia niala teo an-toby tany Gibeona.
2:13 Noho izany, Joaba, , zanak'i Zeroia,, ary ny tanora Davida, nivoaka ka nihaona tamin'ireo teo anilan'ny kamory tao Gibeona. Ary rehefa niara-nivory, dia nipetraka tandrifin'ny hafa: ireo eo amin'ny lafiny iray amin'ny dobo, ary izay tany an-dafin'i.
2:14 Ary hoy Abnera tamin'i Joaba, "Aoka ny tanora hitsangana hanao kilalao eto anatrehantsika." Fa hoy Joaba:, "Aoka ireny no hitsangana."
2:15 Noho izany, dia niainga izy ka nita, isan'ny roa ambin'ny folo lahy tamin'ny Benjamina, avy amin'ny lafiny Isboseta, ny zanak'i Saoly,, ary ny roa ambin'ny folo lahy ny tanora Davida.
2:16 Ary ny tsirairay, mihazona ny mpiara-doha, raikitra ny sabatra ho eo an-ilany ny fahavalo, ary niankohoka teo miara-. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe: Ny sahan'ny Sahy amin 'ny Gibeona.
2:17 Ary ny tena henjana nitsangana ady tamin'izany andro izany. ary Abnera, araka tamin'ny lehilahy amin'ny Isiraely, dia nataony nandositra ny tanora Davida.
2:18 Ary ny telo lahy zanak'i Zeroia teo amin'izany toerana: Joaba, sy Abisay, ary Asahela. Ary Asahela dia tena haingam-pandeha mpihazakazaka, tahaka ny anankiray amin'ny diera izay monina any amin'ny ala.
2:19 Ary Asahela nanenjika an'i Abnera, ka tsy nivily ho amin'ny ankavanana,, na ho amin'ny ankavia, mba hitsahatra amin'ny fikatsahana Abnera.
2:20 Ary noho izany, Abnera niherika ny lamosiny, ka hoy Izy:, "Ianao ve tsy Asahela?"Dia namaly, "Izaho dia."
2:21 Ary hoy Abnera taminy:, "Mandehana any amin'ny ankavanana, na ho amin'ny ankavia, ary hisambotra iray amin'ireo tanora, ary alao ny babo ho anao. "Fa Asahela tsy nety hitsahatra niala taminy ireo tsara.
2:22 Ary indray, Hoy Abnera tamin'i Asahela: "Esory, ary aza misafidy ny hanaraka ahy. Raha tsy izany, Aho, dia ho voatery manindrona anao tamin'ny tany, ary tsy ho afaka ny hanandratra ny tavako eo anatrehan'ny rahalahinao, Joaba. "
2:23 Fa dia nianjonanjona hanaraka azy, Ary izy tsy nety nivily. Noho izany, fihodinana, Abnera namely azy ary ny lefony teo amin'ny teta, ary nandefona azy amin'ny alalan'ny, ka dia maty tany amin'ny toerana iray. Ary ireo rehetra izay te mandalo eny an-toerana, izay Asahela efa lavo ka maty, dia mijanona.
2:24 Ary raha mbola Joaba sy Abisay dia nanenjika an'i Abnera araka izay nandositra, ny masoandro. Ary nandeha hatrany amin'ny Hill ny lakan-drano, izay tandrifin'ny an-dohasaha teny an-dalana avy any an-efitra tao Gibeona.
2:25 Ary ny taranak'i Benjamina nivory teo amin'i Abnera. Ary rehefa nandray anjara tamin'ny ady iray andalana, dia nijanona teo am-tampon'ny havoana anankiray.
2:26 Ary Abnera niantso an'i Joaba, ka hoy Izy:: "Ho tezitra amin 'ny sabatrao fandringanana tanteraka? Moa ve fantatrareo fa mampidi-doza ny hanao zavatra ao anatin'ny hakiviana? Mandra-pahoviana no tsy hilaza ny olona ny hanalavitra ny fikatsahana ny rahalahiny?"
2:27 Ary hoy Joaba:: "Raha velona koa Jehovah, raha efa niteny maraina, ny olona ho nihataka nanenjika ny rahalahiny. "
2:28 Noho izany, Joaba nitsoka ny anjomara, ary ny tafika rehetra nijanona, ka tsy nanenjika ny Isiraely intsony, ary tsy mandray anjara amin'ny ady.
2:29 Ary Abnera sy ny olony nandeha, iny alina iny, ny alalan 'ny lemaka. Ary nita an'i Jordana, Ary rehefa nitety nanerana an'i Beti-horona, dia tonga teo an-toby.
2:30 fa Joaba, niverina rehefa nivoaka Abner, dia namory ny vahoaka rehetra. Ary Davida ny tanora, izy ireo tsy hita sivy ambin'ny folo lahy, ankoatra ny Asahela.
2:31 Fa Benjamina sy ny olona nanaraka Abner, ny mpanompon'i Davida efa nahafaty enim-polo sy telon-jato, koa maty.
2:32 Ary Asahela dia nentiny, dia nalevina tao amin'ny fasan-drainy tany Betlehema. ary Joaba, Ary ny olona izay nomba azy, nandeha an-tongotra nandritra ny alina, dia tonga tao Hebrona tao amin'ny tena nazava ratsy ny andro.
3:1 Avy eo dia nisy ady lava nitranga teo amin'ny taranak'i Saoly sy ny tamingan'i Davida,, tamin'i Davida mandrakizay miroborobo sy mitombo matanjaka, fa ny tamingan'i Saoly mihena isan'andro.
3:2 Sy ny zanany naterany amin'i Davida tao Hebrona. Ary ny zanany lahimatoa dia Amnona, avy Ahinoama Jezirelita.
3:3 Ary ny manarakaraka azy, nisy Kileaba, from Abigail, ilay novinadin'i Nabala Karmelita. Ary ny fahatelo dia Absaloma, zanak'i Maka, , zanakavavin'i Talmay,, ny mpanjakan'i Gesora.
3:4 Ary ny fahefatra dia Adonia, ny zanak'i Hagita. Ary ny fahadimy dia Sefatia, ny zanak'i Abitala.
3:5 koa, ny fahenina dia Jitreama, from Egla, ny vadin'i Davida. Ireo no naterak'i Davida tao Hebrona.
3:6 Avy eo, raha nisy ady teo amin'ny taranak'i Saoly sy ny tamingan'i Davida,, Abner, ny zanak'i Nera, no nanjaka tany an-tranon'i Saoly.
3:7 Ary Saoly nanana vaditsindrano atao hoe Rizpa, ny zanakavavin'i Aia. Ary Isboseta niteny tamin'i Abnera,
3:8 "Nahoana no niditra ho vaditsindranon'i raiko?"Fa, satria very tezitra noho ny tenin'ny Isboseta, nanao hoe:: "Aho ny lohan'ny alika iray hamely ny Joda androany? Efa famindram-po an-tranon'i Saoly, ny rainao, sy ny rahalahiny sy ny namany. Ary tsy nanolotra anao ho eo an-tànan'i Davida,. Na izany aza anefa amin'izao fotoana izao no nitady Ahy, tena mba ananaranao ahy nandritra ny vehivavy?
3:9 Enga anie Andriamanitra manao ireo zavatra ireo ho Abner, ary enga anie izy manampy ireo zavatra hafa, raha, Toy izany koa fa ny Tompo nianiana tamin'i Davida, Tsy manao izany aminy:
3:10 fa nafindra ny fanjakana ho amin'ny tamingan'i Saoly, ary ny seza fiandrianan'i Davida ho ambony ny Isiraely sy ny Joda,, hatrany Dana ka hatrany Beri-sheba. "
3:11 Ary izy tsy afaka mamaly na inona na inona ho azy, satria natahotra azy.
3:12 Noho izany, Abnera dia naniraka olona tany amin'i Davida ho an'ny tenany, nanao hoe:, "An'iza ny tany?"Ary toy izany koa izy ireo fa hoe, "Manaova ny fisakaizana amiko, sy ny tanako homba anao, ary izaho handeha miadana indray ny Isiraely rehetra anao. "
3:13 Ary hoy izy:: "Tena tsara. Izaho hanao fisakaizana aminao. Kanefa zavatra iray loha no angatahiko aminao, nanao hoe:: Ary tsy hahita ny tavako eo anatrehanao entinao atỳ Mikala, ny zanakavavin'i Saoly. Ary toy izany, aminareo ho avy, dia hahita Ahy. "
3:14 Ary Davida naniraka olona nankany amin'Isboseta, ny zanak'i Saoly,, nanao hoe:, "Avereno Mikala vadiko, izay efa nifanekena ho Ahy ho zato Filistina mariky ny fahafatesany. "
3:15 Noho izany, Isboseta naniraka ka nampaka azy avy Paltiela vadiny, ny zanak'i Laisy.
3:16 Ary io vadiny io nanaraka azy, fitomaniana, hatrany Bahorima. Ary hoy Abnera taminy:, "Mandehana, ka hiverina." Dia niverina.
3:17 Toy izany koa, Abnera dia naniraka teny ho any amin'ny loholon'ny Isiraely, nanao hoe:: "Raha be omaly ny andro mialoha, ianao nitady an'i Davida, ka mba hanjaka aminareo.
3:18 Noho izany, hanatanterahana izany izao. Fa Jehovah no efa niteny tamin'i Davida, nanao hoe:: 'Amin'ny tànan'i Davida mpanompoko, Dia hamonjy ny oloko ny Isiraely amin'ny tanan'ny Filistina sy ny fahavalony rehetra. ' "
3:19 Ary Abnera efa niteny tamin'ny Benjamita. Dia nandeha izy ka, ka dia mba lazao amin'i Davida tao Hebrona izay rehetra mety ho mampifaly ny Isiraely sy ny Benjamina rehetra.
3:20 Ary nankany amin'i Davida tao Hebrona sy roa-polo lahy. Ary Davida nanao fanasana ho an'i Abnera, sy ny olona izay efa tonga aminy.
3:21 Ary hoy Abnera tamin'i Davida, "Izaho hitsangana, ka dia mba hamory ny Isiraely rehetra ho any aminareo, ny mpanjaka tompoko, ary mba miditra ao amin'ny fifanarahana miaraka aminao, ary mba hanjakanao amin'izay rehetra, toy ny irin'ny fanahinao. "Avy eo dia, rehefa nitondra Davida Abnera izy, ary efa lasa nody soa aman-tsara,
3:22 avy hatrany ny mpanompon'i Davida sy Joaba tonga, rehefa avy izay namonoany jiolahy, mitafotafo tokoa ny babo. Fa Abnera efa tsy teo amin'i Davida tao Hebrona. Fa dia efa nalefany izy, Ary efa niainga soa aman-tsara.
3:23 ary Joaba, ary ny miaramila rehetra izay nanaraka azy, tonga rehefa afaka izany,. Ary noho izany, Dia nisy nilaza tamin'i Joaba, fanazavana fa Abnera, ny zanak'i Nera, nankany amin'ny mpanjaka, ka dia nalefany azy, ka dia lasa soa aman-tsara izy.
3:24 Ary Joaba niditra tao amin'ny mpanjaka, ka hoy Izy:: "F'inona 'ty nataonao? Indro, Abnera tonga tany aminareo. Nahoana ianao no handroaka azy, ka dia lasa dia lasa nandeha?
3:25 Tsy fantatrao, about Abner, ny zanak'i Nera, dia tonga teo hahazo anao amin'izao, ka mba hamitaka anareo, ary mba hahafantatra ny lasa sy ny hiverina, ary toy izany koa mba hahalalany izay rehetra ataonao?"
3:26 Ary noho izany, Joaba, mivoaka avy any David, naniraka olona hanaraka an'i Abnera, ary nitondra azy niverina avy any amin'ny lavaka fanangonan-drano ny Sirah, tsy misy David mahalala.
3:27 Ary Abnera efa niteny nony niverina tao Hebrona, Dia nentin'i Joaba irery ho any amin'ny afovoan-vavahady, ka mba miresaka aminy, fa amin'ny fitaka. ary, dia nanindrona azy tao amin'ny teta, dia maty izy, in valifaty ho todin'ny ran'i Asahela, rahalahiny.
3:28 Ary nony David efa nahare izany, ankehitriny fa ny raharaha natao, hoy izy:: "Izaho sy ny fanjakako dia madio eo anatrehan'i Jehovah, eny, mandrakizay, ny ran'i Abnera, ny zanak'i Nera.
3:29 Ary enga anie izany hamely amin'ny lohan'i Joaba, manontolo sy amin'ny ankohonan-drainy. Ary enga anie tsy ho tapaka ny ho, tao an-trano Joaba, izay voan'ny nandeha voa, na ny olona iray izay boka, na ny olona iray izay effeminate, na ny lavon-tsabatra, na ny olona iray izay mila ny mofo. "
3:30 Ary noho izany, Joaba sy Abisay rahalahiny an'i Abnera namono, noho ny namonoany an'i Asahela rahalahiny tao Gibeona, nandritra ny ady.
3:31 Dia hoy Davida tamin'i Joaba, ary ny olona rehetra izay teo aminy, "Triaro ny fitafianareo, ary misikìna lamba fisaonana ianareo amin'ny, ka aoka hisaona eo ny mpandevina Abnera. "Ary koa, Kanefa ny tenan'i Davida mpanjaka nanaraka ny casket.
3:32 Ary nony efa nandevina an'i Abnera tao Hebrona, Davida mpanjaka nanandratra ny feony, ary dia nitomany ny fandevenana dongon-tany Abnera. Ary ny vahoaka rehetra koa dia nitomany.
3:33 Ary ny mpanjaka, nisaona sy nitomany Abnera, nanao hoe:: "Tsy izany mihitsy no maty Abnera ny fomba mahazatra kanosa ho faty.
3:34 Ny tananao tsy nifatotra dia, ary ny tongotrao tsy nivesatra gadra. Fa araka ny olona matetika lavo eo anoloan'ny zanaky ny heloka, dia efa lavo. "Ary raha mamerimberina izany, ny olona rehetra nitomany azy.
3:35 Ary ny vahoaka rehetra dia tonga mba hanatitra sakafo tamin'i Davida, raha mbola antoandro, David nianiana, nanao hoe:, "Enga anie Andriamanitra manao ireo zavatra ireo tamiko, ary enga anie izy manampy ireo zavatra hafa, raha mba hitendry hanina na zavatra hafa eo anatrehan'ny masoandro. "
3:36 Ary ny olona rehetra nandre izany, ary izay rehetra nataon'ny mpanjaka teo imason'ny vahoaka manontolo dia mampifaly azy ireo.
3:37 Ary ny olona rehetra iombonana, ary ny Isiraely rehetra, tonga saina tamin'izany andro izany fa ny famonoana an'i Abnera, ny zanak'i Nera, tsy nisy zavatra nataony izay ny mpanjaka.
3:38 Ny mpanjaka koa dia hoy izy tamin'ny mpanompony: "Azonao ho fantatrareo fa ny mpitarika, ary maro be ny olona efa lavo androany teo amin'ny Israely?
3:39 Fa izaho mbola fitiavana, nefa dia mpanjaka efa voahosotra. Ary ireo lahy, zanaky Zeroia henjana loatra ho ahy. Jehovah anie hamaly izay rehetra manao ratsy, araka ny lolompo. "
4:1 Ary Isboseta, ny zanak'i Saoly,, reny fa efa lavo Abnera tao Hebrona. Ary ny tànany ihany no malemy, ary ny Isiraely rehetra dia raiki-tahotra.
4:2 Ary ny zanak'i Saoly, nisy roa lahy, mpitarika jiolahy. Ny anaran'ny iray, Bana, ary ny anaran'ny anankiray dia Rekaba, zanak'i Rimona, ny Berotita tamin'ny taranak'i Benjamina. Fa tokoa, Berota, koa, dia malaza amin'ny Benjamin.
4:3 Ary ny Berotita nandositra nankany Gitaima efa. Ary efa mba vahiny tany, mandra-pahatongan'ny andro izany.
4:4 Ary Jonatana, ny zanak'i Saoly,, nanan-janakalahy amin'ny kilemaina tongotra. Fa izy dia dimy taona, raha ny tatitra momba an'i Saoly sy Jonatana tonga avy any Jezirela. Ary noho izany, ny mpitaiza, nitondra Azy niakatra, nandositra. Ary raha izy haingana, ka dia mba nandositra izy, dia lavo ka natao mandringa. Ary natao hoe Mefiboseta.
4:5 Ary noho izany, zanak'i Rimona Berotita, Rekaba sy Bana, tonga dia niditra tao an-tranon'i Isboseta, ao amin'ny nafana ny andro. Ary Jesosy natory teo am-pandriany amin'ny mitataovovonana. Ary ny mpiandry varavarana-trano, izay manadio ny vary, renoky ny torimaso niankohoka.
4:6 Avy eo dia niditra tao an-trano-tsokosoko, maka ny salohim-bary. Ary Rekaba sy Bana rahalahiny nanindrona azy ao amin'ny teta, ary dia nandositra.
4:7 Ary nony efa niditra tao an-trano, dia natory teo amin'ny fandriany tao amin'ny efitrano mihidy. Ary namely azy, dia namono azy. Ary naka ny lohany, ireo dia niala tamin'ny lalana mankany an-efitra, nandeha nandritra ny alina.
4:8 Ary nitondra ny lohan'Isboseta tany amin'i Davida tao Hebrona. Dia hoy izy ireo tamin'ny mpanjaka: "Indro, ny lohan'Isboseta, ny zanak'i Saoly,, ny fahavalonao, izay nitady ny ainao. Ary noho izany, Jehovah efa namaly ny mpanjaka tompoko, androany, tamin'i Saoly sy ny taranany. "
4:9 fa David, mamaly Rekaba sy Bana rahalahiny, zanak'i Rimona Berotita, hoy izy taminy: "Raha velona koa Jehovah, Izay namonjy ny fanahiko tamin'ny fahoriana rehetra,
4:10 ilay nilaza tamiko ka nanao hoe:, 'Maty Saoly,'Izay nieritreritra fa nilaza vaovao tsara, I nahazo ny. Sy Ziklaga no namono azy izay tokony ho nomena valisoa noho ny vaovao.
4:11 Mainka fa izao, raha olona ratsy fanahy no namono olona tsy manan-tsiny tao an-tranony, eo am-pandriany, no tsy mitaky ny ràny avy amin'ny tananareo, hitondra anareo ho eto an-tany?"
4:12 Ary noho izany, Davida nandidy ny mpanompony, ka dia hamono azy ireo ho faty. Ary nanapaka ny tanany sy ny tongony, dia mihantona azy teo anilan'ny kamory tao Hebrona. Fa ny lohan'Isboseta dia nentina ka nalevina tao amin'ny fasan'i Abnera tao Hebrona.
5:1 Ary ny firenen'Isiraely nankany amin'i Davida tao Hebrona, nanao hoe:: "Indro, izahay, fa taolanao sy nofonao.
5:2 Koa, omaly sy ny andro mialoha, fony Saoly mbola nanjaka taminay, ianao izay mitarika avy sady mitondra ny Isiraely niverina. Ary hoy Jehovah taminareo, 'Ary ny Isiraely oloko niandrasan'ny, ary ianao no ho mpanapaka ny Isiraely. ' "
5:3 koa, ny loholon'ny Isiraely nandeha ho any amin'ny mpanjaka tao Hebrona, ary Davida mpanjaka namely ny fifanarahana taminy tao Hebrona teo imason'ny Tompo. Ary dia nanosotra an'i Davida ho mpanjakan'ny Israely.
5:4 I Davida, zanak'i telo-polo taona, rehefa nanomboka nanjaka, ary nanjaka efa-polo taona.
5:5 tao Hebrona, no nanjakany tamin'ny Joda fito taona sy enim-bolana. Ary tany Jerosalema, no nanjakany telo amby telo-polo taona tamin'ny Isiraely rehetra sy ny Joda.
5:6 Ary ny mpanjaka, ary ny olona rehetra izay nomba azy, lasa nankany Jerosalema, ny Jebosita, ny mponina amin'ny tany. Ary voalaza tamin'ny Davida teny amin'ireo Izy, "Ary tsy hiditra eto, raha tsy dia na dia ny jamba sy ny mandringa, izay manao hoe:, 'I Davida dia tsy ho tafiditra eto.' "
5:7 Ary Davida nahazo ny batery fiarovana, dia Ziona; dia izy no ao an-tanànan'i Davida.
5:8 Fa Davida efa nanolo-kevitra, tamin'izany andro izany, valisoa ho an'izay efa namely ny Jebosita sy izay efa nihatra any amin'ny tatatra ny ny tampon, ary izay efa nandray na dia ny jamba sy ny mandringa izay mankahala ny fanahy Davida. Noho izany, izany no ilazana eo amin'ny ohabolana, "Ny jamba sy ny mandringa tsy hiditra ao amin'ny tempoly."
5:9 Ary Davida nitoetra tao amin'ny batery fiarovana, ary ny anarany dia nataony hoe: Tanànan'i Davida. Fa nanao izany rehetra lafiny, hatrany Milo mbamin'ny ao anatiny.
5:10 Ary nandroso, miroborobo ary tsy mitsaha-mitombo, ary ny Tompo, ny Andriamanitry ny maro, nomba azy.
5:11 koa, Hiram, ny mpanjakan'i Tyro, naniraka olona tany amin'i Davida, miaraka amin'ny hazo sedera, sy ny mpanorina ny hazo sy ny mpanao trano vato, mba hanao manda. Ary nanao trano ho an'i Davida.
5:12 Ary fantatr'i Davida fa Jehovah efa nampitoetra azy ho mpanjakan'ny Isiraely,, ary nanandratra ny fanjakany noho ny amin'ny Isiraely olony.
5:13 Ary Davida mbola naka vaditsindrano sy vady koa tany Jerosalema, rehefa tonga avy tany Hebrona izy. Sy ny zanany ary koa ny zanakavavy koa naterak'i Davida.
5:14 Ary izao no anaran'ny naterany tany Jerosalema: Samoa, sy Sobaba, sy Natana, ary Solomona,
5:15 mihidy, sy Jibara sy Elisoa, sy Noga sy Nafega,
5:16 sy Jafia, sy Elisama, sy Eliada, ary Elipheleth.
5:17 Ary ren'ny Filistina fa efa nanosotra an'i Davida ho mpanjakan'ny Israely. Ary niakatra izy rehetra, ka mba hitady an'i Davida. Ary nony David efa nahare izany, dia nidina nankany amin'ny batery fiarovana.
5:18 Ary ny Filistina, tonga, nihahakahaka teo amin'ny Lohasahan'ny Refaita.
5:19 Ary Davida nanontany ny Tompo, nanao hoe:: "Izaho moa hiakatra ho any amin'ny Filistina? Ary Hatolotrao eo an-tanako?"Ary hoy Jehovah tamin'i Davida: "miakatra. Fa tokoa Aho hanolotra ny Filistina ho eo an-tananao. "
5:20 Noho izany, David nankany Bala-perazima. Dia namely azy teo. Ary hoy izy:, "Ny Tompo dia nampisaraka ny fahavaloko teo anatrehako, toy ny rano nizara. "Noho izany, ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Bala-perazima.
5:21 Ary amin 'izany toerana dia nandao ny sarin-javatra voasokitra, izay Davida sy ny olony nentiny nandeha.
5:22 Ary ny Filistina dia mbola nanohy, ka dia niakatra ka nihahakahaka teo amin'ny Lohasahan'ny Refaita.
5:23 Ary Davida naka hevitra ny Tompo, "Va aho hiakatra hamely ny Filistina, ary no hatolotro ho eo an-tanako?"Dia namaly: "Aza hiakatra hamely azy ireo; fa tsy, faribolana teo ivohony. Ary dia ho tonga tsy ho azon'ny lafiny tandrifin'ny hazo balsama.
5:24 Ary raha mandre ny feon'ny ny zavatra mivoaka avy eny an-tampon'ny hazo ny balsama, dia no hanomboka ny ady. Fa dia ny Tompo dia hivoaka, eo anatrehanao, ka dia mba hamely ny miaramilan'ny Filistina. "
5:25 Ary noho izany, David nanao araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra azy. Ary namely ny Filistina, avy tany Gibeona mandra tonga tao Gazera.
6:1 Ary novorin'i Davida indray ny olom-boafidy rehetra, ny lehilahy amin'ny Isiraely, telo alina.
6:2 Ary Davida niainga ka lasa nandeha, miaraka amin'ny olona rehetra izay nanaraka azy ka niala ny lehilahy amin'ny Joda, ka mba hampiverina ny fiaran'Andriamanitra, over izay hampiharina ny anaran'i Jehovah, Tompon'ny maro,, izay mipetraka eo ambonin'ny kerobima amboniny.
6:3 Ary nametraka ny fiaran'Andriamanitra tamin'ny sariety vaovao. Dia afany koa izy ao an-tranon'i Abinadaba, izay tao Gibeona. Ary Oza sy Ahio, ny zanak'i Abinadaba, nampandeha ny sariety vaovao.
6:4 Ary rehefa nasainy nametraka azy avy tao an-tranon'i Abinadaba, izay tao Gibeona, Ahio nialoha ny sambo araka ny mpitandrina ny fiaran'Andriamanitra.
6:5 Fa Davida sy ny Isiraely rehetra nitsinjaka teo anatrehan'i Jehovah tamin'ny isan-karazany ny zavamaneno vita amin'ny hazo, ary tamin'ny lokanga, sy ny lokanga, sy ny ampongatapaka, ary ny lakolosy, ary ny kipantsona.
6:6 Ary rehefa tonga teo amin'ny famoloan'i Nacon, Oza omena ny tànany tamin'ny fiaran'Andriamanitra, ary izy nanendry azy, satria ny omby dia mandaka ka nahatonga azy ho Soso-kevitra.
6:7 Ary ny fahatezerana 'ny Tompo dia tezitra tamin'i Oza. Dia namely azy noho ny temerity. Ary tao no maty, afa-tsy ny fiaran'Andriamanitra.
6:8 Dia nalahelo i Davida, satria ny TOMPO efa namely Oza. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe: mpitokona an'i Oza, mandraka androany.
6:9 Ary Davida Tena matahotra ny Jehovah ny olona tamin'izany andro izany, nanao hoe:, "Nahoana no ho entina ny fiaran'i Jehovah ho tonga tamiko?"
6:10 Ary tsy vonona ny handefa ny fiaran'i Jehovah ho any ny tenany tao an-Tanànan'i Davida. Fa tsy, dia naniraka tao an-tranon'i Obed-edoma, Gatita.
6:11 Ary ny fiaran'i Jehovah nitoetra tao an-tranon'i Obed-edoma Gatita, nandritra ny telo volana. Ka dia notahin'i Jehovah Obed-edoma, sy ny ankohonany rehetra.
6:12 Ary nisy nilaza tamin'i Davida mpanjaka fa ny TOMPO efa nitahy an'i Obed-edoma, sy izay rehetra tao an-, noho ny fiaran'Andriamanitra. Noho izany, Nandeha Davida ka nitondra ny fiaran'Andriamanitra, avy any an-tranon'i Obed-edoma, ho any an-Tanànan'i Davida tamin'ny fifaliana. Ary nisy fito tamin'i Davida antoko mpihira, ary zanak'omby ho an'ny tra-boina.
6:13 Ary raha ny zava izay nitondra ny fiaran'i Jehovah dia nandeha ambaratonga enina, dia sorona omby sy ondrilahy.
6:14 Ary Davida nitsinjaka mafy dia mafy amin'ny rehetra ny fahaizany eo anatrehan'i Jehovah. Ary Davida nisalotra efoda rongony fotsy.
6:15 ary David, ary ny mpianakavin 'i Isiraely, dia nitondra ny fiaran'ny fanekena 'ny Tompo, amin'ny pifaliana sy ny feon'ny anjomara.
6:16 Ary raha ny fiaran'i Jehovah dia niditra tao an-Tanànan'i Davida, Michal, ny zanakavavin'i Saoly, mijery nivoaka avy teo amin'ny varavarankely, nahita an'i Davida mpanjaka nibitaka sy nitsinjaka teo anatrehan'i Jehovah. Ka dia nikizaka azy tao am-pony.
6:17 Ary izy ireo nitondra ny fiaran'i Jehovah. Dia nametraka azy teo amin'ny fitoerany tao afovoan'ny trano-lay, izay naorin'i Davida ho azy. Ary Davida nanatitra sorona dorana sy fanati-pihavanana eo imason'i Jehovah.
6:18 Ary rehefa vita ny fanatitra dorana sy fanati-pihavanana, dia nitso-drano ny vahoaka tamin'ny anaran'i Jehovah, Tompon'ny maro,.
6:19 Ary dia nizara ny hamaroan'ny Isiraely rehetra, betsaka ny olona ho toy ny vehivavy, ny tsirairay: manala iray amin'ny mofo, ary iray tapa-natono hen'omby, Lafarinina varimbazaha tsara toto sy ny diloilo nendasina. Ary ny vahoaka rehetra nandeha, samy ho any an-tranony.
6:20 Ary Davida koa lasa nody, ka mba hitso-drano ny ankohonany. ary Mikala, ny zanakavavin'i Saoly, nivoaka hitsena an'i Davida, nanao hoe:: "Akory ity voninahitry ny mpanjakan'ny Isiraely androany, mamoaka ny tenany eo anatrehan'ny ankizivavy mpanompony, ary ho hendahana, toy ny hoe iray amin'ireo mpanakanto dia hendahana. "
6:21 Ary hoy Davida tamin'i Mikala: "Eo anatrehan'i Jehovah, Izay nifidy ahy fa tsy ny rainao, ary, fa tsy ny trano iray manontolo, ary iza no nandidy ahy, mba ho mpanapaka ny vahoakan 'ny Tompo teo amin'ny Isiraely,
6:22 Dia samy hilalao sy fanambaniana ny tenako, izany mihoatra noho izaho efa nanao. Ary Izaho ho kely amin'ny maso. Ary ny ankizivavy, momba izay miteny, Dia hiseho be voninahitra bebe kokoa. "
6:23 Ary noho izany, tsy nisy zaza teraka ho Mikala, ny zanakavavin'i Saoly, hatramin'ny andro nahafatesany.
7:1 Ary nitranga fa, raha ny mpanjaka efa nanorim-ponenana tao an-tranony, ary Jehovah no nanome azy fiadanana tamin'ny manodidina rehetra ny fahavalony,
7:2 dia hoy izy tamin'i Natana mpaminany, "Tsy fantatrareo va fa ny ho velona amin'ny trano sedera, ary ny fiaran'Andriamanitra efa napetraka tao afovoan'ny lay hoditra?"
7:3 Dia hoy Natana tamin'ny mpanjaka: "Mandehana, ataovy izay rehetra ao am-ponao. Fa Jehovah no momba anao. "
7:4 Fa nitranga amin'izany alina, indro, ny tenin'i Jehovah tonga tamin'i Natana, nanao hoe::
7:5 "Mandehana, ka lazao amin'i Davida mpanompoko: 'Izao no lazain'i Jehovah: Tokony hanao trano ho ahy ho toy ny fonenany?
7:6 Fa tsy mbola nitoetra an-trano hatramin'ny andro izay nitondra ny zanak'Israely hiala amin'ny tany Egypta, mandraka androany. Fa tsy, Efa nandeha an-tongotra tao amin'ny tabernakely, ary ao an-day.
7:7 Ary any amin'ny tany rehetra izay efa namakivaky ny alalan ', rehetra ny zanak'Israely, I ve no hanao teny na amin'iza na avy amin'ny firenen'Isiraely, izay nasaina niandrasan'ny ny Isiraely oloko, nanao hoe:: Nahoana no tsy nanao trano sedera?'
7:8 Ary ankehitriny, dia toy izany no miteny amin'i Davida mpanompoko: 'Izao no lazain'i Jehovah, Tompon'ny maro,: Izaho no naka anao avy tany amin'ny kijana, avy tamin'ny niandrasanao ondry, ka dia ianao no ho mpanapaka ny Isiraely oloko.
7:9 Ary nomba anao na aiza na aiza fa nandeha an-tongotra. Ary Izaho no namono ny fahavalonao rehetra eo anatrehanao. Ary efa nanao anao ho lehibe anarana, afa-tsy ny anaran 'ny lehibe izay etỳ an-tany.
7:10 Ary Izaho hifidy tany ho an'ny Isiraely oloko, ary hamboleko azy, Ary samy ho velona ao, ary dia tsy ho voahelingelina intsony. Ary aza ny zanaky ny heloka foana, mba hampahory azy toy ny teo aloha,
7:11 hatramin'ny andro nanendreko mpitsara ho mpifehy ny Isiraely oloko. Ary homeko fitsaharana ho anareo amin'ny fahavalonareo rehetra. Ary ny Tompo mialoha ho anareo fa ny Tompo mihitsy no hanao trano ho anao.
7:12 Ary raha ny andro no efa tanteraka, ary ho hodi-mandry any amin'ny razanao, Dia hatsangako ny taranaka handimby anao, izay mivoaka avy ny valahanareo, ary hataoko mafy orina ny fanjakany.
7:13 Izy no hanao trano ho an'ny anarako. Ary Izaho kosa hampitoetra ny seza fiandrianan'ny fanjakany, eny, mandrakizay.
7:14 Izaho ho ray aminy, ary izy ho zazalahy ho ahy. Ary raha manao izay mety ho faharatsiana, Mba hanariko araka ny azy amin'ny tsorakazon'ny olona sy ny ratra avy amin'ny zanak'olombelona.
7:15 Nefa ny famindram-poko aho, dia tsy hesoriko aminy, tahaka ny nanesorako izany tamin'i Saoly izy, izay nanaisotra tsy ho eo anatrehako.
7:16 Ary ny trano dia ho mahatoky, sy ny fanjakanao hitoetra eo anatrehanao, mandrakizay, ary ny seza fiandrianany ho azo antoka foana. ' "
7:17 Araka izany teny rehetra izany, ary araka izao fahitana rehetra, no nolazain'i Natana tamin'i Davida.
7:18 Ary Davida mpanjaka niditra ka nipetraka teo anatrehan'i Jehovah, ka hoy Izy:: "Iza aho, Andriamanitra Tompo ô, ary inona no trano, fa ianao no hitondra ahy ho any io hevitra io?
7:19 Koa, izany dia toa kely eo imasonao, Andriamanitra Tompo ô, raha tsy hiteny ihany koa momba ny taranaky ny mpanomponao nandritra ny fotoana ela. Fa izao no lalàna ny amin'ny Adama, Andriamanitra Tompo ô.
7:20 Noho izany, inona intsony no Davida ho afaka ny hilaza aminareo? Fa Hianao no mahalala ny mpanomponao, Andriamanitra Tompo ô.
7:21 Noho ny teninao, sy araka ny sitraponao, no efa nanaovako izao asa lehibe, mba ho hanambara izany amin'ny mpanomponao.
7:22 Izany no antony, ianao nankalaza, Andriamanitra Tompo ô. Fa tsy misy tahaka Anao. Ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao, ny zavatra rehetra izay efa ren'ny sofiny manokana.
7:23 Inona anefa no firenena, na etỳ an-tany tahaka ny Isiraely olonao, noho izay nalehan'Andriamanitra nivoaka, ka mba hanavotra ny olona ho an'ny tenany, ary hanorina anarana ho an'ny tenany, ary hanatanterahana ho azy ireo zavatra lehibe sy mahatahotra ireo eto an-tany, eo anatrehan'ny olonao, izay navotanao ho anao any Ejipta, ny firenena sy ny andriamaniny.
7:24 Fa efa antoka Isiraely olonao ho anao, ho mandrakizay ny olona. Ary ianao, Andriamanitra Tompo ô, efa tonga Andriamaniny.
7:25 Koa ankehitriny, Andriamanitra Tompo ô, hanangana mandrakizay ny teny nolazainao ny amin'ny mpanomponao sy ny tao an-tranony. Ary hanao araka izay efa nolazainareo,
7:26 mba ny anaranao mba hankalazana an'i eny, mandrakizay, ary toy izany koa mba lazaina: 'Jehovah, Tompon'ny maro, no Andriamanitry ny Israely.' Ary ny taranak'i Davida mpanomponao dia haorina eo an-imason 'ny Tompo.
7:27 Ho anao, Jehovah ô, Tompon'ny maro,, Andriamanitry ny Isiraely,, efa nilaza tamin'ny ny sofina ny mpanomponao, nanao hoe:, 'Izaho no hanao trano ho anao.' Noho izany, ny mpanomponao; Nahita azy tao am-pony hanao izao vavaka izao aminao.
7:28 Koa ankehitriny, Andriamanitra Tompo ô, Andriamanitra Hianao, ary ny teny dia ho marina. Fa ianao no itenenanao amin'ny mpanomponao izao zavatra tsara izany.
7:29 Noho izany, manomboka, ary hitahy ny taranaky ny mpanomponao, ka mba ho mandrakizay eo anatrehanao. Ho anao, Andriamanitra Tompo ô, no niteny. Ary noho izany, dia aoka ny taranaky ny mpanomponao hotahina amin'ny fitahiana mandrakizay. "
8:1 Ary rehefa afaka izany, nony Davida namely ny Filistina, Dia nampanetry tena azy ireo. Ary nalain'i Davida ny lamboridy ny hetra avy amin'ny tanan'ny Filistina.
8:2 Ary nandresy ny Moabita, ary norefesiny azy raha tsipika, leveling ho any an-tany. Ary norefesiny roa andalana, iray hamono, ary ny iray mba ho Velona Hianao. Ary Moaba dia natao hanompo an'i Davida hampanompoina.
8:3 Ary Davida namely Hadadezera, ny zanak'i Rehoba, ny mpanjakan'i Zoba, rehefa niainga ho mpanapaka ny ony Eofrata,.
8:4 Ary avy ny tafiny, David nisambotra arivo sy mpitaingin-tsoavaly fiton-jato amby roa alina miaramila an-tongotra. Ary Elisa nanapaka ny ozatry ny tongotro eo amin'ny rehetra ny soavalin-kalesy. Dia navelany teny manokana ampy aminy kalesy zato.
8:5 Ary ny Syriana avy tany Damaskosy tonga, ka dia mba hitondra fanampin-kery ho Hadadezera, ny mpanjakan'i Zoba. Ary Davida namono amby roa-roa arivo sy iray alina koa ny Syriana.
8:6 Ary Davida ny miaramila napetraka tany Syria any Damaskosy. Ary nanompo an'i Davida Syria hampanompoina. Ary ny Tompo nanampy an'i Davida amin'ny zavatra rehetra na inona na inona izay niainga mba hanatanteraka.
8:7 Ary nalain'i Davida ny armbands volamena, izay amin'ny mpanompon'i Hadadezera nanana, Ary nitondra azy nankany Jerosalema.
8:8 Ary teo Beta sy Berota, tanànan'i Hadadezera, Davida mpanjaka babo be dia be ny izaitsizy tokoa varahina.
8:9 Ary Toi, ny mpanjakan'i Hamata, fa Davida efa naharesy namely ny hery manontolo Hadadezera.
8:10 Ary noho izany, Nirahin'i Toy Jorama zanany hankany amin'i Davida mpanjaka, ka dia mba hiarahaba azy amin'ny Arahabaina, Ary miderà, noho ny niadiany tamin'i Hadadezera ka efa namono azy. Fa tokoa, Toi no fahavalon'ny Hadadezera. Ary teny an-tanany dia fanaka volamena, ary ny fanaka volafotsy, ary ny fanaka varahina.
8:11 Ary Davida mpanjaka koa dia masina izany ho an'ny Tompo, mbamin'ny volafotsy sy ny volamena izay efa nanamasina ny avy any amin'ny firenena rehetra izay efa resy:
8:12 avy any Syria, sy Moaba, Ary ny zanakalahin'i Amôna, ary ny Filistina, ary ny Amalekita, sy ny babo azony tamin'i Hadadezera tsara indrindra, ny zanak'i Rehoba, ny mpanjakan'i Zoba.
8:13 David koa nanao anarana ho an'ny tenany rehefa niverina avy alainy Syria, teo amin'ny Lohasahan-tsira lavaka famorian-drano, rehefa voakapa valo arivo sy iray.
8:14 Ary mpiambina napetraka tany Edoma, ary nametraka ny miaramila. Ary Edoma rehetra dia natao hanompo David. Ary ny Tompo nanampy an'i Davida amin'ny zavatra rehetra na inona na inona izay niainga mba hanatanteraka.
8:15 Ary Davida nanjaka tamin'ny Isiraely rehetra. Ary Davida vita fitsarana sy fahamarinana amin'ny ny vahoakany rehetra.
8:16 Ary Joaba, zanak'i Zeroia, , no mpifehy ny miaramila. ary Josafata, ny zanak'i Ahiloda, no mpiandry ny rakitsoratra.
8:17 ary Zadoka, ny zanak'i Ahitoba, sy Ahimeleka, ny zanak'i Abiatara, no mpisorona. Ary Seraia no mpanoratra.
8:18 ary Benaia, ny zanak'i Joiada, no mpifehy ny miaramila mpiambina andriana ary. Fa ny zanak'i Davida no mpisorona.
9:1 Ary hoy Davida, "Heverinareo ve fa mety ho olona sisa avy ao an-tranon'i Saoly, ka mba haneho famindram-po ho azy noho ny amin'i Jonatana?"
9:2 Ary nisy, avy tao an-tranon'i Saoly, mpanompo atao hoe Ziba. Ary raha ny mpanjaka no efa niantso azy ho an'ny tenany, hoy izy taminy:, "Ianao ve tsy Ziba?"Dia namaly, "Mpanomponao aho."
9:3 Ary hoy ny mpanjaka:, "Mety misy olona velona avy tao an-tranon'i Saoly, ka mba hasiako ny famindram-pon'Andriamanitra taminy?"Ary hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, "Misy sisa velona ny zanakalahin'i Jonatana, amin'ny kilemaina tongony. "
9:4 "Aiza izy?" hoy izy. Ary hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, "Indro, izy ao an-tranon'i Makira, ny zanak'i Amiela,, ao Lo-debara. "
9:5 Noho izany, Davida mpanjaka naniraka ka nitondra azy avy tany an-tranon'i Makira, ny zanak'i Amiela,, avy any Lo-debara.
9:6 Ary rehefa Mefiboseta, ny zanak'i Jonatana, ny zanak'i Saoly,, tonga tamin'i Davida, dia niankohoka, ary izy ka hajaina. Ary hoy Davida, "Mefiboseta?"Dia namaly, "Ny mpanomponao dia eto."
9:7 Ary hoy Davida taminy:: "Aza matahotra. Fa hamindra fo tokoa ho aminao noho ny amin'i Jonatana rainao. Ary honerako ho anareo rehetra ny saha-drainao Saoly. Ary ianao no hihinan-kanina eo amin'ny latabatro mandrakariva. "
9:8 Ary fanehoana fanajana azy, hoy izy:, "Iza aho, mpanomponao, fa tokony hijery fankasitrahana eo ny alika maty tahaka ahy?"
9:9 Ary noho izany, ny mpanjaka atao hoe Ziba, ny mpanompon'i Saoly, ka hoy izy taminy:: "Ny zavatra rehetra na inona na inona izay an'i Saoly, ary ny trano iray manontolo, Dia efa nomeko ho an'ny zanaky ny tomponao.
9:10 Ary noho izany, hiasa ny tany ho azy, ianao sy ny zanakaolahy ary ny mpanomponao. Ary dia ho entinao any sakafo ho an'ny zanaky ny tomponao, ho an'ny sakafo. ary Mefiboseta, ny zanaky ny tomponao, no mihinan-kanina foana eo amin'ny latabatro. "Ary Ziba nanana zanakalahy dimy ambin'ny folo sy mpanompo roa-polo.
9:11 Ary hoy Ziba tamin'ny mpanjaka: "Tahaka tompoko efa nibaiko ny mpanomponao, toy izany no hataon'ny mpanomponao. Ary Mefiboseta, dia hihinana eo amin'ny latabatro, tahaka ny anankiray amin'ny zanaky ny mpanjaka. "
9:12 Ary Mefiboseta nanan-janakalahy tanora Mika no anarany. Marina tokoa, ny foko rehetra tao an-tranon'i Ziba nanompo an'i Mefiboseta.
9:13 Fa Mefiboseta nonina tany Jerosalema. Fa izy dia sakafo foana avy amin'ny latabatry ny mpanjaka. Ary nalemy ny tongony roa.
10:1 Ary rehefa afaka izany, nony fa ny mpanjakan'ny taranak'i Amona maty, ary ny zanany no nanjaka nanaraka azy Hanona.
10:2 Ary hoy Davida, "Izaho hamindra fo amin'i Hanona, ny zanak'i Nahasy, tahaka ny rainy nampiseho famindram-po tamiko. "Koa, Davida naniraka fampiononana ho azy, amin'ny mpanompony, noho ny fandehan'ny-drainy. Fa raha ny mpanompon'i Davida efa tonga tany amin'ny tanin'ny taranak'i Amona,
10:3 ny mpitarika ny taranak'i Amona tamin'i Hanona hoy, ny tompony: "Mieritreritra ve ianao fa izany dia noho ny voninahitry ny rainao fa Davida naniraka consolers aminao? Ary tsy Davida naniraka ny mpanompony ho any aminao, ka mba hanadihady sy hijery ny tanàna, ary toy izany koa mba handrava azy?"
10:4 Ary noho izany, Nosamborin'i Hanona ny mpanompon'i Davida, ary iray noharatany ny antsasaky ny fehin'i volombavany, ary nanapaka ny fitafiany teo anilan'ny afovoany, hatrany amin'ny fitombenako, ka dia nalefany hody izy.
10:5 Ary rehefa izany efa nilaza tamin'i Davida, izy naniraka hitsena azy. Ary ny olona no sosotra be ny henatra. Ary Davida nandidy azy, "Tsy Miala Amin'ny Jeriko, mandra-mitombo ny volombava, ary avy eo dia hiverina. "
10:6 Ary ny zanakalahin'i Amona, satria efa nataony ny ratsy tamin'i Davida, dia naniraka tany amin'i, ary ny vola karama ho, ny Syriana any Rehoba, ary ny Syriana avy any Zoba, miaramila an-tongotra roa alina, sy ny mpanjakan'i Maka, iray alina, ary avy Tob, roa arivo sy iray alina.
10:7 Ary nony efa nandre izany i Davida, dia naniraka an'i Joaba sy ny tafika manontolo ny miaramila.
10:8 Ary ny taranak'i Amona nivoaka, ary dia napetraka ny tafiky alohan'ny tena fidirana amin'ny vavahady. Fa ny Syriana avy any Zoba, ary Rehoba, ary ny Tob, ary Maka, ireo kosa dia nitokana teny an-tsaha.
10:9 Ary noho izany, nahita fa ny ady efa voaomana hiady aminy, na manatrika azy sy teo aoriany, Joaba nifidy ny sasany avy amin'ny olom-boafidy rehetra, lehilahy amin'ny Isiraely, Ary nanangana ady tsipika tandrifin'ny Syriana.
10:10 Fa ny sisa ao anatin'ny olona dia natolony ny rahalahiny Abisay, izay namorona ny tsipika ady hamely ny taranak'i Amona.
10:11 Ary hoy Joaba:: "Raha ny Syriana handresy ahy, Avy eo dia manampy ahy. Fa raha ny taranak'i Amona haharesy anao, dia hataoko ho hanampy anao.
10:12 Aoka ianao ho lehilahy mahery. Ary aoka isika hiady ho an'ny vahoakantsika sy ny tanànan 'Andriamanitsika. Ary ny Tompo dia hanao izay tsara tao an-imasony. "
10:13 Ary noho izany, Joaba, ary ny olona izay nomba azy, nanaiky ny ady tandrifin'ny Syriana, ary niaraka tamin'izay dia nandositra teo alohany.
10:14 Avy eo, nahita fa efa nandositra ny Syriana, ny taranak'i Amona ny tenany ihany koa nandositra ny tavan'i Abisay, ka dia niditra tao an-tanàna. Ary Joaba niverina avy tamin'ny taranak'i Amona, ary dia lasa izy nankany Jerosalema.
10:15 Ary noho izany, ny Syriana, satria efa lavo teo anoloan'ny Isiraely, nivory.
10:16 Ary Hadadezera naniraka ka nitondra ny Syriana izay tany an-dafin'ny Ony, dia nitondra ny tafiny. ary Sobaka, ny hitondra ny miaramila azony tamin'i Hadadezera, no mpitondra azy ireo.
10:17 Ary rehefa izany efa nilaza tamin'i Davida, nanintona miaraka Isiraely rehetra. Ary niampita an'i Jordana, ary dia lasa izy nankany Helama. Ary ny Syriana hiady namorona-dalana, tandrifin'i David, izy, dia niady taminy.
10:18 Ary ny Syriana nandositra teo anoloan'ny Isiraely ny tavan'ny. Ary Davida nahafaty, teo anivon 'ny Syriana, ny mponina tao kalesy fiton-jato, ary ny mpitaingin-tsoavaly efatra alina. Ary namono Sobaka, ny mpitarika ny miaramila, izay maty avy hatrany.
10:19 Ary ny mpanjaka rehetra izay tao an-fanampin-kery Hadadezera, mahita ny tenany ho resy teo anoloan'ny Isiraely, dia raiki-tahotra indrindra ary dia nandositra niala: valo arivo amby dimam-polo lahy teo anoloan'ny Isiraely. Ary dia nanao fihavanana tamin'ny Isiraely, ka dia nanompo azy. Ary ny Syriana natahotra mba hanolotra fanampiana ho an'ny taranak'i Amona intsony.
11:1 Ary nitranga fa, niherina ny taona, amin'ny andro fandehanan'ny mpanjaka matetika nalefa hanafika, David naniraka an'i Joaba, sy ny mpanompony izay nanaraka azy, ary ny Isiraely rehetra, ary nandrava ny taranak'i Amona, ka dia nanao fahirano an'i Raha. Fa Davida kosa nijanona tany Jerosalema.
11:2 Raha izany no mitranga, David nitranga tamin'ny hitsangana avy amin'ny fandriany rehefa mitataovovonana, Ary nandeha teo amin'ny lavarangana ao an-tranon'ny mpanjaka. Ary nahita, manerana amin'ny lavarangana, vehivavy mandro. Ary ravehivavy dia tsara tarehy maha.
11:3 Noho izany, ny mpanjaka naniraka olona ka nanontany hoe: Iza ilay vehivavy mety ho. Ary nisy nilaza taminy fa i Batseba, zanakavavin'i Eliama, ny vadin'i Oria, ny Hetita.
11:4 Ary noho izany, Davida naniraka olona, dia naka azy izy. Ary nony efa niditra taminy, dia lasa nodimandry any amin'ny azy. ary ankehitriny, dia nanamasina ny tenany ho afaka tamin'ny halotoany.
11:5 Dia nody tany an-tranony, rehefa torontoronina Ilay Zaza. ka naniraka, izy nilaza David, ary hoy izy:, "Efa nanan-anaka."
11:6 Ary Davida naniraka tany amin'i Joaba, nanao hoe:, "Alefaso mankaty amiko kely Oria, ny Hetita. "Ary Joaba naniraka Oria tamin'i Davida.
11:7 Ary nankany amin'i Davida Oria. Ary Davida nanontany raha i Joaba manao tsara, sy ny amin'ny vahoaka, sy ny fomba ny ady dia ho nitarika.
11:8 Ary hoy Davida tamin'i Oria, "Mankanesa ao an-tranonao, ka sasao ny tongotrao. "Ary Oria niala tao an-tranon'ny mpanjaka. Ary ny sakafo avy amin'ny mpanjaka nanaraka azy.
11:9 Nefa Oria nandry teo am-bavahady ao an-tranon'ny mpanjaka, miaraka amin'ny hafa mpanompon'ny tompony, ka tsy nidina nody tany an-tranony.
11:10 Ary nisy nilaza tamin'i Davida sasany, nanao hoe:, "Oria dia aza miditra ao an-tranony." Ary hoy Davida tamin'i Oria: "Mbola tsy tonga avy amin'ny dia lavitra? Nahoana no tsy midina any an-tranonao?"
11:11 Fa hoy Oria tamin'i Davida: "Ny fiaran'Andriamanitra, sy ny Isiraely sy ny Joda, mitoetra an-day, ary Joaba tompoko, sy ny mpanompon'ny tompoko, mijanona eto ambonin 'ny tany. Ary tokony izaho kosa va hody any an-tranoko, ka mba hihinana sy hisotro, dia hatory miaraka amin'ny vadiko? By ny hahasoa sy izay hahasoa ny fanahinareo, Tsy hanao izany zavatra izany. "
11:12 Noho izany, Hoy Davida tamin'i Oria, "Na izany aza, mitoetra eto amin'izao andro izao, ary rahampitso dia halefako anao. "Dia nitoetra tany Jerosalema Oria, tamin'izany andro izany sy manaraka.
11:13 Ary Davida niantso azy, ka dia mba mihinana sy misotro eo anatrehany, dia nampanjaka azy mamo. Ary niala tao amin'ny hariva, dia natory ny lamba firakotra, amin'ny mpanompon'ny tompony, ka tsy nidina nody tany an-tranony.
11:14 Noho izany, nony maraina tonga, Davida dia nanoratra taratasy ho any amin'i Joaba. Ary dia naniraka azy ny tanan 'Oria,
11:15 manoratra ao amin'ny taratasy: "Apetraho Oria tandrifin'ny ady, izay misy ny ady no matanjaka indrindra, ary avy eo dia handao azy, amin'izay mba, rehefa naratra, mba ho faty. "
11:16 Ary noho izany, raha i Joaba nanao fahirano ny tanàna, Oria dia napetraka tao amin'ny eo amin'izay hitany ny mafy ny olona mba ho.
11:17 Ary ny olona, miala ao an-tanàna, nanafika Joaba. Ary ny sasany tamin'ny olona teo amin'ny mpanompon'i Davida latsaka, sy Oria Hetita maty koa.
11:18 Ary noho izany, Joaba naniraka ka nilaza tamin'i Davida ny teny rehetra momba ny ady.
11:19 Ary nandidy ilay iraka, nanao hoe:: "Rehefa vita ny teny rehetra momba ny ady amin'ny mpanjaka,
11:20 raha mahita azy ho tezitra, Ary raha hoy izy: 'Nahoana no manatona ny manda, mba hiady? Moa ve fantatrareo fa maro ny zana-tsipika dia natsipy avy any ambony ny manda?
11:21 Iza no namely an'i Abimeleka, ny zanak'i Jerobala? Moa tsy vehivavy sombiny hanipy vato fikosoham-bary taminy avy teo amin'ny manda, ary dia hamono azy tao Tebeza? Nahoana no afa-manatona ny manda?', Dia ianao dia hanao hoe:: 'Mpanomponao Oria, ny Hetita, maty ihany koa ny lainga. ' "
11:22 Noho izany, ilay iraka lasa. Dia nandeha izy ka nilaza tamin'i Davida izay rehetra efa nampianatra Joaba azy.
11:23 Ary hoy ny iraka tamin'i Davida: "Nahery noho izahay, ary dia nankany amin'ny ho antsika any an-tsaha. Avy eo dia nanenjika azy ireo, manao rodobe hamely, na dia ho any amin'ny vavahadin'ny tanàna.
11:24 Ary ny mpandefa zana-tsipìka ny zana-tsipìkany mivantana amin'ny mpanomponao teo amin'ny màndan'i ambony. Ary ny sasany tamin'ny maty ny mpanompon'ny mpanjaka, ary avy eo koa ny Oria Hetita mpanomponao mba maty. "
11:25 Ary hoy Davida tamin'ny iraka: "Ary hilaza izany zavatra izany Joaba: 'Aoka tsy mahakivy anao izany zavatra izany. Fa isan-karazany no ny zava-nitranga ny ady. Ary ity iray ity, ary ankehitriny fa ny iray, dia ringan'ny sabatra. Ampirisiho ny mpiady hamely ny tanàna sy manentana azy ireo, mba handringana azy. ' "
11:26 Ary ny vadin'i Oria dia nahare fa ny vadiny efa maty Oria, dia nisaona azy.
11:27 Fa rehefa vita ny hira fahalahelovana, Davida naniraka ka nitondra azy tao an-tranony, ary lasa vadiny, ary niteraka zazalahy izy taminy. Ary izao teny izao, izay nataon'i Davida, dia mampifaly eo imason'i Jehovah.
12:1 Ary Jehovah naniraka an'i Natana hankao amin'i Davida. Ary rehefa tonga tao aminy, hoy izy taminy:: "Nisy roa lahy ireo tao amin'ny tanàna iray: ny iray mpanan-karena, ary ny iray malahelo.
12:2 Ny lehilahy manan-karena nanana ondry aman'osy maro be sy omby.
12:3 Fa ny malahelo kosa tsy nanana na inona na inona, afa-tsy ondry kely iray, izay efa novidiny. Ary efa nitombo teo anatrehany, miaraka amin'ny zanany, nihinana tamin'ny mofo, sy nisotro tamin'ny kapoakany, ary teo an-tratrany matory. Ary izy dia toy ny zanani-vavy azy.
12:4 Fa raha misy anankiray tonga dia lavitra ho any amin'ny lehilahy mpanankarena, tsy miraharaha ny hitondra avy ny ondry aman'osy sy omby, mba horaisiny ho an'ny andro firavoravoana izany dia lavitra, izay tonga tao aminy, Dia naka ny ondry ny malahelo, dia nanomana sakafo ho an'ilay olona tonga tao aminy. "
12:5 Ary dia tezitra Davida tezitra indrindra hanandrina izany olona izany, ka hoy izy tamin'i Natana: "Raha velona koa Jehovah, ilay lehilahy izay nanao izany dia zanak'i fahafatesana.
12:6 Dia hanonitra avo efatra heny ny ondry, noho ny nanaovany izany teny, ka tsy antra. "
12:7 Fa hoy Natana tamin'i Davida: "Ianareo izany olona izany. Izao no lazain'i Jehovah, ny Andriamanitry ny Isiraely,: 'Izaho nanosotra anao ho mpanjakan'ny Israely, ary namonjy anareo tamin'ny tànan'i Saoly.
12:8 Dia natolotro an-tranon'ny tomponao ho anao, ary ny vadiny ny tomponao ho andefimandrinao. Dia natolotro teo mpianakavin 'i Isiraely sy ny Joda ho anao. Ary toy ny hoe izany tokoa no kely, I manampy be ny zavatra lehibe kokoa ho anao.
12:9 Noho izany, nahoana ianao no nanamavo ny tenin'ny Tompo, mba nanao izay ratsy eo imasoko? Efa namono Oria Hetita tamin'ny sabatra. Ary efa naka ny vadiny ho toy ny vady ho anao. Ary efa namono azy ho faty tamin'ny sabatra ny taranak'i Amona.
12:10 Izany no antony, ny sabatra dia tsy hiala amin'ny taranakao, na dia mandrakizay, satria efa nanamavo ahy, ary efa naka ny vadin'i Oria Hetita, ka mba ho vadinao. '
12:11 Ary noho izany, izao no lazain'i Jehovah: 'Indro, Izaho efa hahatonga anareo ny loza avy ao amin'ny ankohonanao ihany. Ary izaho dia haka ny vadinareo hiala eo imasonao, fa Izaho no hanome azy ho ny namanao. Ary izy no handry amin'ny vadinao eo imason'i masoandro ity.
12:12 Fa ianao nanao zavatra mangingina. Ary Izaho kosa haneho izany teny izany eo imason'ny Israely rehetra, ary teo imason'ny ny masoandro. ' "
12:13 Ary hoy Davida tamin'i Natana, "Efa nanota tamin'i Jehovah." Ary hoy Natana tamin'i Davida: "Ny Tompo dia nesorina ihany koa ny ota. Tsy ho faty ianao.
12:14 Na izany aza tena, satria efa nanome fotoana ny fahavalony 'ny Tompo dia ny hiteny ratsy, noho izany teny izany, ny zanaka teraka ho anareo: ho faty dia ho faty. "
12:15 Ary Natana nody tany an-tranony. Ary Jehovah namely ny kely, izay ny vadin'i Oria naterany tamin'i Davida, ary izy nanantena ny.
12:16 Ary Davida niangavy ny Tompo ho an'ny amin'ny kely. Ary Davida dia nifady hanina tanteraka, ary niditra irery, dia nandry niampatra tambonin'ny tany.
12:17 Ary ny loholona tao an-tranony tonga, mampirisika azy hitsangana avy amin'ny tany. Ary izy tsy nety, ary tsy ho izy hihinana ny sakafo amin'izy ireo.
12:18 Avy eo, amin'ny andro fahafito, nony fa maty ny zaza. Ary ny mpanompon'i Davida natahotra ny tatitra ho an'izay Ny kely maty. Fa hoy izy ireo:: "Indro, raha ny zaza mbola velona, izahay niresaka taminy, fa tsy nety nihaino ny feon'ny. Tsy mainka izy hampahory ny tenany, raha milaza azy fa ilay zazalahy efa maty?"
12:19 Ary nony efa nahita Davida ny mpanompony mibitsibitsika, dia fantany fa maty ny zaza efa. Ary hoy izy tamin'ny mpanompony, "Ny zaza maty?"Dia namaly azy, "Izy no maty."
12:20 Noho izany, David nitsangana avy teo amin'ny tany. Ary rehefa nanasa ny tenany ka nanosotra an'i. Ary rehefa nanova ny fitafiany, dia niditra tao an-tranon'i Jehovah, Dia niankohoka teo anatrehany. Avy eo izy dia nankany an-tranony, dia nanontany azy Izy mba hametraka kanina teo anatrehany, Ary nihinana.
12:21 Fa ny mpanompony nanao taminy hoe:: "Ahoana re izao teny izay efa nataonao? Ianao dia nifady hanina sy nitomany, amin'ny anaran'ny ny zaza, fony Izy mbola velona. Fa rehefa maty ny zaza, ianao nitsangana izy ka nihinan-kanina. "
12:22 Ary hoy izy:: "Raha mbola velona, Dia nifady hanina sy nitomany amin'ny anaran'ny ny zaza. Fa hoy izaho:: Iza no mahalala raha toa ny Tompo angamba hanome azy ho ahy, ary aoka ny zaza velona?
12:23 Fa ankehitriny fa maty, nahoana aho no hifady hanina? Ve aho, ho afaka hitondra azy hiverina intsony? Fa tsy, Izaho no hankany aminy. Na izany aza tena, izy tsy hiverina atỳ amiko. "
12:24 Ary Davida nampionona ny zanany Batseba vadiny. Ary raha niditra taminy, dia lasa nodimandry any amin'ny azy. Ary niteraka zazalahy izy, ary ny anarany nataony hoe Solomona, ary tia azy ny Tompo.
12:25 Ary dia naniraka, ny tanan 'Natana mpaminany, ary ny anarany nataony hoe, Ry malala 'ny Tompo, satria ny Tompo no tia azy.
12:26 Ary Ary Joaba namely an'i Raban'ny taranak'i Amona, Ary niady ivelan'ny tanànan'ny mpanjaka.
12:27 Ary Joaba naniraka olona tany amin'i Davida, nanao hoe:: "Efa niady mafy an'i Raba, ary toy izany koa ny tanàna misy rano ho ela dia nosamborin'ny.
12:28 Koa ankehitriny, angòny ny sisa anjaran'ny ny vahoaka rehetra, ary fahirano ny tanàna, ary aoka ho afakao izy. Raha tsy izany, raha ny tanàna dia efa lao avy amiko, ny fandresena ho nosoratan'i ny anarako. "
12:29 Ary toy izany novorin'i Davida ny vahoaka rehetra, Ary niainga an'i Raba. Ary rehefa ny niadiany, dia nisambotra azy.
12:30 Dia naka ny satro-boninahitr'ilay mpanjaka hatramin'ny lohany. Ny lanjan'ny azy dia talenta volamena iray, manana vatosoa sarobidy indrindra. Ary nisy napetraka eo an-dohan'i Davida. Koa, dia nesorin'ny olona ny babo tao an-tanàna, izay dia maro indrindra.
12:31 koa, mahavokatra ny mponina, tapatapahina amin'ny antsy izy ireo, ka noroahin'i azy vy sariety, Ary nizara azy tamin'ny antsy, ary izy nitondra azy tamin'ny alalan'ny biriky kilns. Ary nataony tamin'ny olom-pirenena rehetra tamin'ny taranak'i Amona. Ary Davida koa lasa nody, miaraka amin'ny tafika manontolo, ho any Jerosalema.
13:1 Ary rehefa afaka izany, nitranga fa Amnona, ny zanak'i Davida, raiki-pitia tamin'ny anabavy tsara tarehy indrindra Absaloma, ny zanak'i Davida, dia natao hoe Tamara.
13:2 Dia pined ho azy izaitsizy tokoa, loatra ka, amin'ny fitiavana ho azy, dia tonga narary. Fa, satria izy virjiny, dia toa ho sarotra ho taminy izy mba hanao zavatra marina sy ny.
13:3 Ary Amnona nanan-tsakaiza anankiray atao hoe Jonadaba, ny zanak'i Simea, ny rahalahin'i Davida: tena mahira-tsaina.
13:4 Ary hoy izy taminy:: "Nahoana no lasa dia manify isan'andro isan'andro, Ry zanaky ny mpanjaka,? Nahoana no Tsy tianao hambara amiko?"Dia hoy Amnona taminy:, "Izaho-pitia Tamara, ny anabavin'i Absaloma rahalahiko. "
13:5 Ary hoy Jonadaba taminy:: "Avia hanao firaisana amin 'ny fandrianao, ary nody aretina. Ary rehefa ho tonga ny rainao mba hamangy anao, lazao aminy hoe:: 'Mangataka anareo aho mba aoka Tamara anabaviko hankatỳ amiko, ka izy mba hanome ahy sakafo, ary mety hanao sakafo kely, ka mba hihinanako ny avy eny an-tànany. ' "
13:6 Ary noho izany, Nandry Amnona, ary izy vao hanao zavatra toy ny hoe ireo marary. Ary rehefa tonga ny mpanjaka hamangy azy, Amnona hoy izy tamin'ny mpanjaka, "Masina Hianao, mamindrà aoka Tamara anabaviko hankatỳ amiko, ary hataony eo imasoko ampahany kely roa ny sakafo, ka dia izaho no hahafaka azy avy eny an-tànany. "
13:7 Noho izany, Davida naniraka nankany amin'i Tamara any an-tranony, nanao hoe:, "Andeha isika ho any an-tranon'i Amnona anadahinao, ary manao sakafo kely ho azy. "
13:8 Dia nandeha Tamara nankany an-tranon'i Amnona anadahiny. Nefa Izy dia nandry. Ary naka koba tsara toto, nofenoiny izany. Ary niravan'ilay izany eo imasony, ampahany kely dia nahandro ny sakafo.
13:9 Ary maka ny zavatra efa masaka, dia nandraraka izany teo, ary narosony teo anatrehany. Fa tsy nety nihinana. Ary hoy Amnona, "Alefaso ny olona rehetra hiala amiko." Ary rehefa nandefa ny olona rehetra izy,
13:10 Hoy Amnona tamin'i Tamara, "Ento etỳ ny sakafo any an-efi-trano, ka hihinanako ny tananao. "Ary noho izany, Nalain'i Tamara ny ampahany kely ny sakafo izay efa nataony, ary izy nitondra azy ho any Amnona anadahiny tao amin'ny efitrano fandrian.
13:11 Ary nony efa nanolotra ny sakafo ho azy, dia nihazona an'i Tamara, ka hoy Izy:, "Avia handry amiko, ny anabaviko. "
13:12 Izy namaly azy hoe:: "Aza manao izany, ny anadahiko! Aza misavika ahy. Fa tsy misy zavatra toy izany dia tsy maintsy atao amin'ny Isiraely. Aza mifidy ny hanao izany asa adala.
13:13 Fa tsy ho afaka ny hahazaka ny henatro. Ary dia ho toy ny anankiray amin'ny adala eo amin'ny Isiraely. Fa tsara kokoa ny miteny amin'ny mpanjaka, dia tsy handà ahy ho atỳ aminareo. "
13:14 Nefa izy tsy vonona ny hanaiky ny fanangonan-tsonia. Fa tsy, nandresy ny hery, dia nisavika azy, Ary nandry taminy.
13:15 Ary Amnona nanao fankahalana ho azy amin 'ny fankahalana lehibe izaitsizy tokoa, loatra ka ny fankahalany miaraka izay nankahala azy dia be lavitra noho ny fitiavana izay efa tia azy eo anatrehan'i. Dia hoy Amnona taminy:, "Mitsangàna, ka mandehana. "
13:16 Dia hoy ravehivavy namaly azy hoe:, "Izao loza izao lehibe kokoa, izay ankehitriny manao nanohitra Ahy tamin'ireo nandroaka ahy, noho izay nataonao taloha. "Nefa tsy nety nihaino azy izy.
13:17 Fa tsy, niantso ny mpanompo izay nanompo azy, hoy izy:, "Alatsaho ity vehivavy ity nivoaka avy amiko, ka manidy ny varavarana izy. "
13:18 Ary izy niakanjo ny akanjo lava dia fehin-. Fa ny virjiny zanakavavin'ny mpanjaka nanao fampiasana ity karazana akanjo. Ary noho izany, nanopy ny mpanompony avy, Ary rehefa nahorony ny varavarana izy.
13:19 Dia natopiny lavenona amin'ny lohany, dia nandriatra ny akanjo lava dia fehin-. Ary mametraka ny tànany eo amin'ny lohany, izy dia nivoaka, mandeha sady niantso.
13:20 Ary hoy Absaloma anadahiny taminy: "Efa Amnona anadahinao nandry taminao? Fa ankehitriny, rahavavy, Mangìna. Fa rahalahinao izy. Ary tsy tokony hampahory ny fanahiko noho ny amin'izany zavatra izany. "Ary dia, Tamara nitoetra, pahina tao an-tranon'i Absaloma anadahiny.
13:21 Ary nony efa ren'i Davida mpanjaka ny amin'izany zavatra izany, dia nalahelo mafy. Nefa izy tsy vonona ny hampahory ny Fanahin'ny Zanany Amnona. Fa fitiavany azy, satria izy no lahimatoa.
13:22 Nefa Absaloma tsy niteny Amnona, akory na soa na ratsy. Fa halan'i Absaloma izy noho ny nandika Tamara anabaviny.
13:23 Avy eo, araka ny fotoana ny roa taona, nony fa ny ondry Absaloma dia ho nohetezana tany Bala-hazora, izay akaiky an'i Efraima. Ary Absaloma, ka nanasa ny zanakalahin'ny mpanjaka.
13:24 Dia nankany amin'ny mpanjaka, ka hoy izy taminy:: "Indro, ny ondry ny mpanomponao no ho nohetezana. No angatahako ny mpanjaka, amin'ny mpanompony, Mety atỳ amin'ny mpanompony. "
13:25 Ary hoy ny mpanjaka tamin'i Absaloma:: "Aza, ny zanako lahy, aza misafidy ny hangataka mba hahafahantsika rehetra ho avy sy ho tonga enta-mavesatra ho anao. "Dia, rehefa nanery azy, ary efa nandà tsy handeha, dia notsofiny rano izy.
13:26 Ary hoy Absaloma, "Raha tsy mety ho avy, Miangavy anao aho, , fara fahakeliny, aoka Amnona rahalahiko no niaraka taminay. "Ary hoy ny mpanjaka taminy, "Tsy ilaina ny hiarahany aminao."
13:27 Fa nanery azy Absaloma, ary toy izany koa dia naniraka an'i Amnona sy ny zanakalahin'ny mpanjaka. Ary Absaloma nanao fanasana, toy ny fanasan'ny mpanjaka.
13:28 Ary Absaloma nanome teny ny zatovony, nanao hoe:: "Tandremo rehefa Amnona dia lasa mamon'ny divay. Ary raha hoy Izaho aminareo, 'Namely sy nahafaty azy!' aza matahotra. Fa Izaho no nandidy anao. Mahereza sy ny lehilahy mahery. "
13:29 Noho izany, ny zatovon'i Absaloma nanao zavatra tamin'i Amnona, araka ny teny nomen'i Absaloma azy ireo. Ary ny zanaky ny mpanjaka nitsangana, ary samy niakatra teo amin'ny ampondrany ka nandositra.
13:30 Ary raha mbola nandeha izy ireo teo ilay dia, ny tsaho tonga tany David, nanao hoe:, "Absaloma efa namono ny zanaky ny mpanjaka,, ary tsy misy iray amin'izy ireo sisa tavela. "
13:31 Ary toy izany ny mpanjaka nitsangana, ary dia nandriatra ny fitafiany, ary izy namely ny tany. Ary ny mpanompony rehetra, izay nijoro teo akaiky azy, dia nandriatra ny fitafiany.
13:32 fa Jonadaba, ny zanak'i Simea, Rahalahin'i Davida, mamaly, nanao hoe:: "Ry mpanjaka tompoko ô dia tsy tokony hihevitra fa ny zanaky ny mpanjaka no novonoina. Amnona ihany no maty. Fa izy dia napetrany teo akaikin'i 'ny vavan' Absaloma hatramin'ny andro dia nanolana Tamara anabaviny.
13:33 Koa ankehitriny, Aoka ny tompoko tsy ny mpanjaka nametraka izany teny izany tao am-pony, nanao hoe:, 'Rehetra zanaky ny mpanjaka no novonoina.' Fa Amnona ihany no maty. "
13:34 Ary Absaloma nandositra. Ary ilay zatovo nitandrina, dia nanopy ny masony izy ka nibanjina avy. Ary indro, maro ny olona no tonga teny amin'ny lalana lavitra teo anilan'ny ny tendrombohitra.
13:35 Ary hoy Jonadaba tamin'ny mpanjaka: "Indro, ny zanaky ny mpanjaka eto. Araka ny tenin'ny mpanomponao, ka izany no nitranga. "
13:36 Ary rehefa nitsahatra niteny, ny zanaky ny mpanjaka koa dia niseho. ary raha niditra, dia nanandratra ny feony, ary samy nitomany izy mirahalahy. Ary ny mpanjaka koa, ary ny mpanompony rehetra, nitomany tamin'ny nitomany lehibe izaitsizy tokoa.
13:37 Ary Absaloma, nandositra, nankany amin'i Talmay, ny zanak'i Amihoda, ny mpanjakan'i Gesora. Ary Davida nisaona ny zanany isan'andro.
13:38 Ary rehefa efa nandositra ka efa tonga tany Gesora, Absaloma tao amin'io toerana io nandritra ny telo taona. Ary Davida mpanjaka nitsahatra ny hanenjika Absaloma, satria efa nampionona noho ny fandehan'ny Amnona.
14:1 Ary Joaba, , zanak'i Zeroia,, fantany fa ny fon'ny mpanjaka dia efa nitodika an'i Absaloma,
14:2 ka dia naniraka tany Tekoa, ary dia nentiny avy any ny vehivavy hendry. Ary hoy Jesosy taminy:: "Nody fa ianao no eo amin'ny fisaonana, ary hitafy ny fitafiana ny olona iray izay misaona. Ary aza tsy hihosotra diloilo, mba ho tahaka ny vehivavy izay mbola nidonam-pahoriana ho an'ny olona iray izay maty fotoana lasa izay.
14:3 Ary dia hiditra ho any amin'ny mpanjaka,, ary izy hilaza teny toy izany aminy. "Dia nomen'i Joaba teny izy.
14:4 Ary noho izany, nony efa ravehivavy avy any Tekoa tamin'ny mpanjaka niditra, dia niankohoka teo anatrehany izy tamin'ny tany, ary izy ka hajaina, ary hoy izy:, "Vonjeo aho, Ry mpanjaka ô. "
14:5 Ary hoy ny mpanjaka taminy, "Inona no olana ve ianao?"Ary izy namaly: "Indrisy, Izaho dia vehivavy izay mpitondratena. Fa efa maty ny vadiko.
14:6 Ary ny mpanompovavinao nanan-janaka roa lahy. Dia nila ady tamin'i iray hafa any an-tsaha. Ary tsy nisy teo, izay ho afaka hanakana azy ireo. Ary ny anankiray namely ny hafa, ary namono azy.
14:7 Ary indro, ny mpianakavy rehetra, eny, nifoha ady tamiko mpanompovavinao, nanao hoe:: 'Atolory ilay namely ny rahalahiny, mba hataonay maty izy noho ny ain'ny rahalahiny, izay novonoiny, ary toy izany koa mba hanaisotra ny mpandova. 'Ary mitady ny hamono ny pitik'afo izay sisa, ka mety tsy ho velona anarana ho an'ny vadiko, na ny sisa tavela amin 'ny tany. "
14:8 Ary hoy ny mpanjaka tamin-dravehivavy, "Mandehana any an-tranonao, ary Izaho manao didy ny aminareo. "
14:9 Ary hoy ravehivavy avy any Tekoa tamin'ny mpanjaka: "Enga anie ny heloka ho ahy, tompoko, sy amin'ny taranaky ny raiko. Fa mety ny mpanjaka sy ny seza fiandrianany dia aoka tsy manan-tsiny. "
14:10 Ary hoy ny mpanjaka:, "Na iza na iza no manohitra anao, ento etỳ amiko, dia tsy haninona anao intsony. "
14:11 Ary hoy izy:, "Aoka ny mpanjaka ny fahatsiarovana ny Tompo Andriamaniny, ka ra havana akaiky dia mety tsy ho maro mba hamaly faty, ary mba tsy mety hamono ny zanako. "Ary hoy izy:, "Raha velona koa Jehovah, tsy singam-bolo iray amin'ny zanakao dia ho latsaka amin'ny tany. "
14:12 Dia hoy ravehivavy:, "Aoka ny mpanompovavinao hanao teny ny amin'ny mpanjaka tompoko." Ary hoy izy:, "Lazao."
14:13 Ary hoy ravehivavy:: "Nahoana ianao no nihevitra toy izany hamely ny olon'Andriamanitra, ary nahoana no ny mpanjaka niteny izany teny izany, ka dia fahotana ka tsy hampiverina ny olona izay nolaviny?
14:14 Maty daholo isika, ary isika rehetra dia toy ny rano mikoriana any an-tany, ary tsy miverina. Andriamanitra tsy Amin'izay dia ho very fanahy. Fa tsy, dia manavao ny ezaka, mieritreritra fa ny zavatra efa nolavina tsy mety ho very tanteraka.
14:15 Noho izany, ankehitriny dia efa tonga hilaza izany zavatra izany amin'ny mpanjaka tompoko, eo anatrehan 'ny olona. Ary hoy ny mpanompovavinao: Fa izaho dia hilaza amin'ny mpanjaka, fa angamba dia mety hisy fomba ho an'ny mpanjaka mba hahatanteraka ny teny ny ankizivaviny.
14:16 Ary nihaino ny mpanjaka, ary ny mpanompovaviny ho afaka amin'ny tanan'ny rehetra izay vonona ny hanala ahy mbamin'ny zanako, avy amin'ny lova nomen'Andriamanitra.
14:17 Noho izany, aoka ny ankizivavinao hiteny, ka ny tenin 'ny mpanjaka tompoko dia mety ho toy ny sorona. Fa na dia tahaka ny anjelin'Andriamanitra, dia toy izany ny mpanjaka tompoko, ka dia taitra tsy tso-drano, na fanozonana. Ary koa, Jehovah Andriamanitrao no momba anao. "
14:18 Ary ho setrin'ny, hoy ny mpanjaka tamin-dravehivavy, "Aza manafina avy amiko ny tenin'i zavatra hanontaniako anao." Ary hoy ravehivavy taminy, "Mitenena, ny mpanjaka tompoko. "
14:19 Ary hoy ny mpanjaka:, "Tsy ny saina nomen'i Joaba va izany rehetra izany?"Fa ravehivavy namaly ka nanao hoe:: "Ny hahasoa ny fanahinareo, ny mpanjaka tompoko, dia na ho amin'ny ankavia, na ho amin'ny ankavanana, amin'izany rehetra izany fa ny mpanjaka tompoko no efa niteny. Fa ny mpanomponao no nandidy ahy Joaba, ary Izy no nametraka izany teny rehetra izany tao am-bavan'ny ankizivavinao.
14:20 Toy izany no mitodika any aho io sarin-teny, fa Joaba mpanomponao nampianatra azy. fa ianareo, ny mpanjaka tompoko, hendry, tahaka ny anjelin'Andriamanitra ianao dia manana fahendrena, mba hahatakatra rehetra eo ambonin'ny tany. "
14:21 Ary hoy ny mpanjaka tamin'i Joaba: "Indro, ny teny efa nahavita hampitonena ahy. Noho izany, Handeha haka indray ny zaza Absaloma. "
14:22 Ary lavo tamin'ny tany teo ny tavany, Joaba ka hajaina, Dia nitso-drano ny mpanjaka. Ary hoy Joaba:: "Androany ny mpanomponao fantany fa efa mahita fitia eo imasonao, ny mpanjaka tompoko. Fa efa nahavita ny tenin'ny mpanomponao. "
14:23 Ary Joaba niainga, ary dia lasa nankany Gesora. Ary nentiny nanatona koa Absaloma tany Jerosalema.
14:24 Fa hoy ny mpanjaka:, "Aoka hody any an-tranony, fa aza avela hahita ny tavako. "Ary dia, Absaloma nankany an-tranony, fa tsy hahita ny tavan 'ny mpanjaka.
14:25 Ary ny Isiraely rehetra, tsy nisy olona tena tsara tarehy, ary toy izany koa tahaka an'i Absaloma tena marevaka. Avy amin'ny faladia ho any an-tampon-doha, tsy nisy tsiny izy.
14:26 Ary rehefa noharatany ny volony, fa noharatany izany eny indray mandeha isan-taona, satria ny volony lava no mahavaky tratra azy, dia nolanjainy ny volon-dohany, sekely roan-jato, ny vato-bahoaka.
14:27 Dia telo lahy naterany tamin'i Absaloma, sy vavy iray, ny kanto teny, Tamara no anarany.
14:28 Ary Absaloma nitoetra roa taona tany Jerosalema, ka dia tsy nahita ny tavan'ny mpanjaka.
14:29 Ary noho izany, dia naniraka tany amin'i Joaba, ka mba hanirahany azy ho any amin'ny mpanjaka. Fa tsy nety nankany aminy izy. Ary rehefa naniraka fanindroany, ary efa nandà tsy hanatona azy,
14:30 dia hoy izy tamin'ny mpanompony: "Fantatrareo fa ny sahan'i Joaba, ny izay akaiky ny tanimbariko, manana vokatry ny vary hordea. Noho izany, andeha, dory amin'ny afo izany. "Ary dia, ny zatovon'i Absaloma nandoro ny vary an-tsaha. Ary ny mpanompon'i Joaba, tonga ny fitafiany rovitra, nanao hoe:, "Ary ny mpanompon'i Absaloma dia nandoro ny ampahany any an-tsaha!"
14:31 Ary Joaba niainga, ary dia lasa izy nankany Absaloma tao an-tranony, ka hoy Izy:, "Nahoana ny mpanomponao no nandoro ny vary an-tsaha?"
14:32 Ary Absaloma tamin'i Joaba namaly: "Izaho naniraka tany aminao, mangataka mba tonga atỳ amiko, ary mba hirahiko ho any amin'ny mpanjaka, ary mba hilaza aminy: 'Nahoana no niala tany Gesora aho nitondra? Mety ho tsara kokoa ho ahy ny ho eo. 'Miangavy anao aho, noho izany, mba hahita ny tavan'ny mpanjaka. Ary raha izy Mieritreritra ny helony, aoka izy hamono ahy ho faty. "
14:33 Ary noho izany, Joaba, miditra ny mpanjaka, nilaza ny zava-drehetra ho azy. Ary Absaloma dia nampiantso. Ary niditra tao amin'ny mpanjaka, ary ka hajaina teo ambonin 'ny tany. Ary nanoroka an'i Absaloma ny mpanjaka.
15:1 Avy eo, Rehefa afaka izany,, Absaloma nahazo kalesy ho an'ny tenany, sy mpitaingin-tsoavaly, ary dimam-polo lahy izay nialoha Azy.
15:2 Dia niainga maraina, Absaloma dia nitsangana teo akaikin'ny fidirana amin'ny vavahady. Ary raha nisy olona nanana ady izay mety hialoha ny mpanjaka ny didim-pitsaran'Andriamanitra, Absaloma dia hiantso azy ho azy, ka dia hoy, "Iza moa Hianao tanàna?"Ary mamaly, izy hoe:, "Izaho no mpanomponao, avy amin'ny fokon'i Israely anankiray. "
15:3 Ary Absaloma dia namaly azy: "Ny teny toa tsara sy marina Izy ka ahy. Fa tsy misy notendren'ny mpanjaka hihaino anao. "Ary dia hoy Absaloma:
15:4 "Iza no nanendry ahy ho mpitsara amin'ny tany, ka ireo rehetra izay manana ady mety manatona Ahy, ary mba hitsara ny marina. "
15:5 Ary koa, raha misy olona te hanatona azy, ka dia mba hiarahaba azy, dia mety mihitatra ny tanany, ary mihazona azy, izy ka ho nanoroka azy.
15:6 Ary izy nanao izany tamin'izay rehetra amin'ny Isiraely tonga ny fitsarana mba ho re ny mpanjaka. Ary mangataka ho azy ny fon'ny lehilahy amin'ny Isiraely.
15:7 Avy eo, rehefa afaka efa-polo taona, Fa hoy Absaloma tamin'i Davida mpanjaka: "Izaho dia tokony handeha sy Hanefa ny voadiko, izay nivoadiako ho an'i Jehovah tao Hebrona.
15:8 Fa ny mpanomponao tsy nanao voady, fony Izy tany Gesora any Syria, nanao hoe:: Raha toa ny Tompo dia hitarika ahy niverina tany Jerosalema, Dia hamono zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah. "
15:9 Ary Davida mpanjaka nanao taminy hoe:, "Mandehana soa aman-tsara." Dia niainga izy ka lasa ho any Hebrona.
15:10 Skoty izy ireo Absaloma naniraka ho any amin'ny firenen'Isiraely, nanao hoe:: "Raha vao mandre ny blare anjomara, milaza: 'Absaloma no mpanjaka ao Hebrona.' "
15:11 Ary rehefa nantsoina, roan-jato lahy avy tany Jerosalema nivoaka amin'i Absaloma, mandeha amin'ny fahatsoram-po, ary ho tanteraka tsy mahalala ny drafitra.
15:12 Koa nantsoiny Absaloma Ahitofela Gilonita, ny mpanolo-tsaina an'i Davida,, avy any an-tanànany, Gilo. Ary nony immolating niharam-boina, tena mafy dia nianiana fianianana, ary ny olona, haingana miara-, niaraka tamin'i Absaloma.
15:13 Ary nisy iraka nankany amin'i Davida, nanao hoe:, "Amin'ny fony rehetra, dia ny Isiraely rehetra dia manaraka an'i Absaloma. "
15:14 Ary hoy Davida tamin'ny mpanompony, izay tao aminy tany Jerosalema: "Mitsangàna, andeha isika handositra! Fa raha tsy izany dia tsy hisy afa-mandositra ho antsika ny tavan'i Absaloma. Faingana hiala, fandrao, eo tonga, mba hisambotra antsika, ary manery-doza eo amintsika, ary hamely ny tanàna tamin'ny lelan-tsabatra. "
15:15 Ary hoy ny mpanompon 'ny mpanjaka taminy, "Ny zavatra rehetra na inona na inona fa ny mpanjaka tompoko handidy, izahay mpanomponao no hanatanteraka an-tsitrapo. "
15:16 Noho izany, ny mpanjaka lasa, mbamin'ny ankohonany manontolo an-tongotra. Ary ny mpanjaka namela folo vavy ao ambadiky ny vaditsindranony mba hikarakara ny trano.
15:17 Ary rehefa nivoaka an-tongotra, ny mpanjaka sy ny Isiraely rehetra nijanona teny lavidavitra eny hatrany an-trano.
15:18 Ary ny mpanompony rehetra niaraka taminy. Ary ny legiona ny Cerethites sy Phelethites, ary ny Gatita rehetra, mpiady mahery, enin-jato lahy izay nanaraka azy avy tany Gata an-tongotra, dia teo aloha ny mpanjaka.
15:19 Dia hoy ny mpanjaka tamin'i Itahy Gatita: "Nahoana ianao no hiaraka aminay? Hiverina sy hiaina hiaraka amin'ny mpanjaka. Fa ianao olon-kafa, ary niala tao amin'ny fonenany.
15:20 Tonga ianao omaly. Ary amin'izao fotoana izao no tokony ho voatery handeha hiaraka aminay? Fa tokony handeha amin 'ny toerana izay alehako. Fa tokony hiverina, ary ny rahalahy hitarika ny miverina miaraka aminao. Ary ny Tompo dia maneho famindram-po sy fahamarinana aminareo, satria ianareo efa naneho fahasoavana sy ny finoana. "
15:21 Fa Itahy namaly ny mpanjaka, amin'ny hoe:, "Raha velona koa Jehovah, ary raha ny mpanjaka tompoko fiainana, na inona na inona toerana ianao dia ho, ny mpanjaka tompoko, na ho faty na eo amin'ny fiainana, ny mpanomponao no ho eo. "
15:22 Ary hoy Davida tamin'i Itahy, "Avia, mandroso ary. "Fa Itahy Gatita nita, ary ny olona rehetra izay nomba azy, ary ny sisa amin'ny vahoaka.
15:23 Ary izy rehetra nitomany tamin'ny feo mahery, ary ny vahoaka rehetra nita. Ny mpanjaka koa dia nita ny lohasahan-driaka Kidrona. Ary ny vahoaka rehetra nandroso tamin'ny tandrifin'ny làlana izay manatrika dia mivoaka hankany amin'ny tany efitra.
15:24 Ary Zadoka mpisorona koa nandeha, sy ny Levita rehetra niaraka taminy, nitondra ny fiaran'ny faneken'Andriamanitra. Ary nametraka ny fiaran'Andriamanitra. Ary Abiatara niakatra, mandra-ny olona rehetra izay efa niala avy tany an-tanàna efa lasa.
15:25 Ary hoy ny mpanjaka tamin'i Zadoka: "Ento miverina ny fiaran'Andriamanitra any an-tanàna. Fa raha mahita fitia eo imason'i Jehovah, Izy no hitarika ahy hiverina. Ary izy hanoro azy ho ahy ao amin'ny lainy.
15:26 Fa raha izy no hanao amiko, 'Ianao no tsy mahafaly,' Vonona aho. Dia aoka izy hanao izay tsara tao an-imasony. "
15:27 Ary hoy ny mpanjaka tamin'i Zadoka mpisorona: "Ny mpahita, hiverina any an-tanàna soa aman-tsara. Ary aoka ny zanak'i Ahimaza, ary Jonathan, ny zanak'i Abiatara, ny roa lahy, Ho aminareo.
15:28 Indro, Hafeniko teo Arbota-any an-efitra, mandra-pahatongan'izay teny avy aminao dia mety tonga hambara amiko. "
15:29 Noho izany, Zadoka sy Abiatara nitondra ny fiaran'Andriamanitra niverina ho any Jerosalema 'Andriamanitra, dia nitoetra tany.
15:30 Ary Davida niakatra tany amin'ny Tendrombohitra Oliva, rehefa niakatra sy nitomany, mandroso amin'ny niteraka tongony, ary nisaron-doha. Koa, ny vahoaka rehetra izay niaraka taminy niakatra, nitomany amin'ny nanarona ny lohany.
15:31 Ary nisy nilaza tamin'i Davida fa Ahitofela koa dia efa nandray anjara tamin'ny nianiana tamin'i Absaloma. Ary hoy Davida, "Tompo ô, Miangavy anao aho, mba hiseho ny fahadalana ny hevitra ataon'i Ahitofela. "
15:32 Ary nony efa niakatra tany Davida ny tampon'i an-tendrombohitra, izay halehany mba mankafy ny Tompo, indro Hosay Arkita nitsena azy, ny akanjo rovitra sy nisaron-doha amin'ny tany.
15:33 Ary hoy Davida taminy:: "Raha hiaraka amiko, ianao dia ho tonga enta-mavesatra ho ahy.
15:34 Fa raha hiverina any an-tanàna, ka hanao amin'i Absaloma, 'Izaho no mpanomponao, Ry mpanjaka ô; toy ny nisy, mpanompon'i-drainao, toy izany koa no ho mpanompo anareo,'Ianao, dia handringana ny hevitra ataon'i Ahitofela
15:35 Ary ao aminao koa ny mpisorona Zadoka sy Abiatara. Ary misy teny na inona na inona fa ho hihaino any an-tranon'ny mpanjaka, dia manambara amin'i Zadoka sy Abiatara, ny mpisorona.
15:36 Ary aminy ny zanany roa lahy dia Ahimaza, , zanak'i Zadoka,, ary Jonathan, ny zanak'i Abiatara. Ary dia naniraka ho any amiko ny azy ireo ny teny rehetra izay dia efa renareo. "
15:37 Noho izany, Hosay, ny sakaizan'ny David, nankany an-tanàna. Ary Absaloma koa dia niditra tany Jerosalema.
16:1 Ary nony efa lasa Davida kely any an-dafin'ny tampon'ny tendrombohitra, Ziba, , mpanompon'i Mefiboseta,, niseho hitsena azy, amin'ny boriky roa, izay vesaran'ny mofo roan-jato, ary ny zato voaloboka maina voaloboka, ary ny zato korontam-maina aviavy, Ary ny hoditry ny divay.
16:2 Ary hoy ny mpanjaka tamin'i Ziba, "Inona no mikasa ny hanao izany zavatra izany amin'ny?"Ary namaly Ziba: "Ny boriky dia ho an'ny ankohonan'ny mpanjaka, mba hipetraka. Ary ny mofo sy ny aviavy maina dia natao noho ny mpanomponao mba hihinana. Fa ny divay ho an'ny olona ny misotro izay mety ho reraka any an-efitra. "
16:3 Ary hoy ny mpanjaka:, "Aiza ny zanaky ny tomponao?"Ary hoy Ziba tamin'ny mpanjaka: "Dia nijanona tao Jerosalema, nanao hoe:, 'ankehitriny, ny taranak'Isiraely dia hampody ny fanjakan 'ny Raiko ho ahy.' "
16:4 Ary hoy ny mpanjaka tamin'i Ziba, "Ny zavatra rehetra izay ho Mefiboseta izao anareo." Ary hoy Ziba, "Miangavy anao aho mba hahitako fitia eo anatrehanao, ny mpanjaka tompoko. "
16:5 Ary Davida mpanjaka niditra hatrany Bahorima. Ary indro, nisy lehilahy anankiray avy amin'ny havanao tao an-tranon'i Saoly, atao hoe Simey, ny zanak'i Gera, nivoaka avy teo. Ary nivoaka, dia nanohy, ka dia nanozona,
16:6 ary nitora-bato an'i Davida sy hamely ny mpanompony rehetra Davida mpanjaka. Ary ny olona rehetra sy ny lehilahy mahery rehetra, dia nankany amin'ny ankavanana sy any amin'ny ankavia lafiny roa amin'ny mpanjaka.
16:7 Ary noho izany, raha mbola manozona ny mpanjaka, hoy Simey: "Andehana mandeha, andehana mandeha, ianareo mpandatsa-drà, ary lehilahy tena ratsy fanahy!
16:8 Ny Tompo dia namaly anao izao ny ran'ny tamingan'i Saoly. Fa efa Nandrombaka ny fanjakana nandimby azy. Ary noho izany, ny Tompo dia nanome ny fanjakana ho eo an-tànan'i Absaloma, ny zanakao. Ary indro, ny zava-dratsy mifanety akaiky aminareo, satria mpandatsa-dra. "
16:9 Ary Abisay, , zanak'i Zeroia,, hoy izy tamin'ny mpanjaka: "Nahoana io alika maty io hanozona ny mpanjaka tompoko? Aoka aho handeha ka hanapaka ny lohany. "
16:10 Ary hoy ny mpanjaka:: "Inona no akory izaho sy ianareo rehetra, Ry zanak'i Zeroia? mamela azy, ka dia mba hanozona. Fa ny Tompo dia nandidy azy mba hanozona David. Ary iza no Izay ho sahy hilaza, 'Nahoana no nanao izany izy?'"
16:11 Ary hoy ny mpanjaka tamin'i Abisay sy tamin'ny mpanompony rehetra: "Indro, ny zanako lahy, izay nivoaka avy kiboko, dia mitady ny aiko. Mainka no zanak'i Benjamina manao izany ankehitriny? mamela azy, ka dia mba hanozona, araka ny didin'i Jehovah.
16:12 Angamba hijery ny Tompo amin'ny famindram-po ny fahoriako, ary ny Tompo hamaly soa ahy, ho solon'ny ny ozona nanjo andro-any. "
16:13 Ary noho izany, David nanohy nandeha teny an-dalana, sy ny mpiara-miasa aminy. Fa Simey nandroso nanaraka ny tandavan ny tendrombohitra amin'ny lafiny tandrifiny, ny ozona sy ny nitora-bato azy, ary nampiely vovoka.
16:14 Ary ny mpanjaka sy ny vahoakany hanaraka azy izy manontolo, ho reraka, lasa aina teo izy.
16:15 Ary Absaloma sy ny vahoakany rehetra niditra tao Jerosalema. Koa, Ahitofela, no nomba azy.
16:16 Ary rehefa Hosay Arkita, Sakaizan'i Davida, efa lasa nandeha Absaloma, hoy izy taminy:: "Enga anie ianao ho tsara, Ry mpanjaka ô! Enga anie ianao ho tsara, Ry mpanjaka ô!"
16:17 Ary hoy Absaloma taminy: "Io va no fitianao ny sakaizanao? Nahoana no tsy nandeha niaraka tamin'ny sakaizanao?"
16:18 Ary Hosay tamin'i Absaloma namaly: "Tsy izany mihitsy! Fa Izaho ho, izay tian'i Jehovah no nofidin'i. Sy izaho, ary izao olona rehetra izao, ary ny Isiraely rehetra, dia hitoetra aminy.
16:19 Fa avy eo koa, I nanazava izao: iza no hotompoiko? Tsy ny zanaky ny mpanjaka? Toy ny efa nisy foto-kevitra ny rainao, toy izany koa no tsy manaiky anareo koa. "
16:20 Ary hoy Absaloma tamin'i Ahitofela hoy, "Atolory ny torohevitra ny amin'ny zavatra tokony hatao."
16:21 Ary hoy Ahitofela tamin'i Absaloma: "Midira amin'ny vaditsindranon-drainao, izay dia niala aoriana, mba hikarakara ny trano. Dia toy izany no, raha rehetra ho ren'ny Isiraely fa afa-baraka ny rainao, ny tanany mba hery miaraka aminao. "
16:22 Noho izany, dia nanorin-day ho an'i Absaloma teo amin'ny tampon-trano. Ary dia niditra tao amin'ny vaditsindranon-drainy teo imason'ny Isiraely rehetra.
16:23 Ary ny hevitra ataon'i Ahitofela, izay nomeny tamin'izany andro izany, dia entina toy ny hoe Andriamanitra iray ihany no mila hevitra. Noho izany dia isaky ny hevitra ataon'i Ahitofela, na rehefa teo amin'i Davida, Ary raha tonga teo amin'i Absaloma.
17:1 Dia hoy Ahitofela tamin'i Absaloma: "Izaho no mifidy ny tenako roa arivo sy iray alina, ary nitsangana, Dia hanenjika an'i Davida anio alina.
17:2 Ary maika azy, fa reraka izy, ary efa nalemy tanana, Hamely azy. Ary izy rehetra dia vahoaka eo aminy, dia nandositra, Dia hamely ny mpanjaka teo amin'ny fitokana-monina.
17:3 Ary Izaho hampiverina ny olona manontolo, niverina tao ny fanaon'ny olona iray. Fa ianao no mitady afa-tsy olona iray. Ary ny vahoaka rehetra dia ho soa aman-tsara. "
17:4 Ary izao teny izao sitrak'i Absaloma sy ny lehibe rehetra tamin'ny Isiraely teraka.
17:5 Fa hoy Absaloma, "Antsoy Hosay Arkita, ary aoka ho rentsika koa izay mety holazainareo. "
17:6 Ary nony efa lasa nandeha Hosay tamin'i Absaloma, Hoy Absaloma taminy: "Hevitr'i Ahitofela teny toy izany. Tokony hanao izany na tsia? Inona no torohevitra no manome?"
17:7 Ary hoy Hosay tamin'i Absaloma, "Ny hevitra nataon'i Ahitofela 'izao fotoana izao dia tsy tsara."
17:8 Ary ankoatra izany dia nilaza Hosay, "Hianao mahalala ny rainao, Ary ny olona izay miaraka aminy, fa tena matanjaka sy mangidy eo amin'ny fanahy, mitovy ny bera vaika any an'ala, raha zanany efa nesorina. Koa, ny rainao dia lehilahy mpiady, ary toy izany koa fa tsy ho velona any amin'ny firenena.
17:9 Angamba ankehitriny miafina amin'ny lavaka famorian-drano, na ny eo amin'ny teny hafa, na aiza na aiza izay sitrapony,. Ary raha sendra, tany am-piandohana, na iza na iza dia mety ho latsaka, na iza na iza mandre momba izany, na inona na inona izay efa reny, hanao hoe:, 'Misy no maty teo amin'ny vahoaka izay nanaraka Absaloma.'
17:10 Ary na dia ny matanjaka, manana fo tahaka ny fon'ny liona, ho malemy noho ny tahotra. Fa ny olona rehetra amin'ny Isiraely mahalala ny rainao ho lehilahy mahery fo, ary izay rehetra miaraka aminy dia matanjaka.
17:11 Fa izao toa ahy ho amin'ny tsara torohevitra: Aoka ny Isiraely rehetra hangonina ho anao, hatrany Dana ka hatrany Beri-sheba, tahaka ny fasika any an-dranomasina izay tsy hita isa. Ary dia ho eo aminy.
17:12 Ary izahay dia maika hamely azy na inona na inona toerana dia efa hita. Ary hanarona azy, tahaka ny ando matetika latsaka amin 'ny tany. Ary isika, dia tsy mandao na dia iray tamin'ireo olona izay miaraka aminy.
17:13 Ary raha miditra ao amin'izay tanànan'ny, rehetra amin'ny Isiraely dia hisakambina amin'izany tanàna izany miaraka amin'ny tady. Ary izahay no misintona azy ho eo an-driaka, ka mety tsy ho hita na dia vato kely iray avy amin'izany. "
17:14 ary Absaloma, rehetra ny lehilahy amin'ny Isiraely, nanao hoe:: "Ny fisainan'i Hosay Arkita no tsara noho ny hevitra ataon'i Ahitofela." Dia, amin'ny alalan'ny asa 'ny Tompo, ny ilaina hevitra ataon'i Ahitofela dia resy, mba fa ny Tompo dia mety hitarika ny ratsy noho Absaloma.
17:15 Ary hoy Hosay tamin'i mpisorona, Zadoka sy Abiatara: "Ahitofela nanome saina Absaloma sy ny loholon'ny Isiraely amin'ity tany ity sy izay fomba. Ary nomeko torohevitra toy izany sy ny toy izany fomba.
17:16 Koa ankehitriny, maniraha haingana izao, ary tatitra tamin'i Davida, nanao hoe:: 'Aza hitoetra anio alina ao amin'ny fitàna any amin'ny efitra. Fa tsy, hatrany, handeha manerana. Raha tsy izany dia mety ho ny mpanjaka rotidrotiky, sy ny vahoaka rehetra izay miaraka aminy. ' "
17:17 Fa Jonatana sy Ahimaza nitoetra teo anilan'ny Loharano ny rogela. Ary ny mpanompovavinao nandeha ka nilaza izany taminy. Dia niainga, ka dia mba hitondra ny tatitra hankany amin'i Davida mpanjaka. Fa tsy ho hita, na hiditra any an-tanàna.
17:18 Fa nisy kosa lehilahy anankiray nahita azy ireo zatovo, ary nanambara azy ho Absaloma. Na izany aza tena, dia nandeha faingana ka niditra tao an-tranon'ny lehilahy anankiray tany Bahorima, izay nisy lavaka fantsakana tao an-tokotaniny, dia nidina ao anatiny.
17:19 Dia nalain'ny vehivavy anankiray ka namelatra ny lay handrakofana ny vavan'ny lavaka fantsakana, toy ny hoe paharitry hulled vary hordea. Ary toy izany dia miafina ny raharaha.
17:20 Ary raha ny zatovon'i Absaloma nanao ny trano, dia nanao tamin-dravehivavy, "Aiza i Ahimaza sy Jonatana?"Ary ravehivavy namaly azy ireo, "Dia nandeha namaky haingana, rehefa naka rano kely. "Fa ireo izay nitady azy ireo, rehefa tsy nahita azy, niverina tany Jerosalema.
17:21 Ary nony efa lasa, dia niakatra avy ao amin'ny lavaka fantsakana. ary nandeha, dia nilaza tamin'i Davida mpanjaka, ka hoy izy:: "Mitsangàna, ka mandehana haingana manerana ny renirano. An'i Ahitofela dia nanome ny torohevitra toy izany hamely anao. "
17:22 Noho izany, David nitsangana, sy ny vahoaka rehetra izay nanaraka azy, Ary nita an'i Jordana, mandra-fahazavana. Ary na dia iray amin'izy ireo ihany no sisa aoriana izay tsy tafita ny renirano.
17:23 Ary hoy Ahitofela, nahita fa ny hevitra dia tsy natao, nanisy lasely ny borikiny, ka dia niainga izy ka lasa ho any an-tranony sy ho any an-tanànany. Ary nametra-tranony mba, dia novonoiny izy nahantony. Ary nalevina tao amin'ny fasan-drainy.
17:24 Ary Davida nankany amin'ny toby, ary Absaloma nita an'i Jordana, dia izy sy ny lehilahy rehetra amin'ny Isiraely izay nanaraka azy.
17:25 Marina tokoa, Absaloma nanendry Amasa ho solon'i Joaba mpifehy ny miaramila. Ary Amasa dia zanak'ilay lehilahy iray izay nantsoina hoe Ithra ny Jezirela, izay niditra tamin'i Abigaila, ny zanakavavin'i Nahasy, ny anabavin'i Zeroia, izay ny renin'i Joaba.
17:26 Ary ny Isiraely nanao toby amin'i Absaloma tany amin'ny tany Gileada.
17:27 Ary nony efa Davida tonga teo amin'ny toby, indreo, tamy Soby, ny zanak'i Nahasy, avy any Raba, ny avy tamin'ny taranak'i Amona, ary Makira, ny zanak'i Amiela, avy any Lo-debara, ary Barzilay, Gileadita, avy any Rogelima,
17:28 nentina tany aminy lamba firakotra, ary ny zavatra notenomina misy sarisary, sy vilany tany, ary ny vary, sy vary hordea, sy ny sakafo, ary vary masaka, sy tsaramaso, ary voanemba, ary voaendy zana-borona pitipoà,
17:29 sy tantely, sy ronono, ondry ary zanak'omby mifahy. Ary ireo dia nomeny an'i Davida sy ho an'ny olona nanaraka azy hihinan-. Fa izy ireo ahiahiana fa ny olona reraka amin'ny hanoanana sy ny hetaheta any an-efitra.
18:1 Ary toy izany David, rehefa avy nandinika ny vahoakany, ho lohany sy kapiteny tribunes.
18:2 Ary nametraka ny ampahatelony ny olona eo ambany saina nomen'i Joaba, ary ny ampahatelony nofehezin'i Abisay,, , zanak'i Zeroia,, , rahalahin'i Joaba,, ary ny ampahatelony nofehezin'i Itahy, izay avy tany Gata. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny vahoaka, "I, koa, dia handeha hiaraka aminareo. "
18:3 Ary ny olona namaly: "Ianao dia tsy mba ho. Fa raha mandositra, dia tsy ho lehibe ao aminy niahy ho antsika. Na raha misy antsasaky ny fehin'i antsika ho lavo, dia tsy mampaninona loatra. Fa ianao dia heverina ho toy ny anankiray ho iray alina. Noho izany, fa tsara mba ho ao an-tanàna mba hampahery antsika. "
18:4 Ary hoy ny mpanjaka taminy, "Izaho dia hanao izay sitrakao." Koa, ny mpanjaka nitsangana teo anilan'ny vavahady. Dia nivoaka ny olona noho ny andian-tafika, zato sy arivo.
18:5 Ary ny mpanjaka nandidy an'i Joaba sy Abisay ary Itahy, nanao hoe:, "Arovy ho ahy ny zaza Absaloma." Ary ny olona rehetra nandre ny mpanjaka nandidy ny lehibe rehetra amin'ny anaran'ny Absaloma.
18:6 Ary noho izany, ny olona niala an-tsaha tamin'ny Israely. Ary ny ady nitranga tao amin'ny alan'i Efraima.
18:7 Ary ny lehilahy amin'ny Isiraely dia kapaina amin'izany toerana ny tafika Davida. Ary be dia be nitranga tamin'izany andro izany: dia olona roa alina.
18:8 Ary ny ady amin 'izany tany izany dia niparitaka noho ny tavan'ny ny tany rehetra. Ary nisy maro kokoa ny olona izay efa lany ritra ny ala, noho ny sabatra efa nihinana, tamin'izany andro izany.
18:9 Ary nony fa Absaloma, mitaingina ampondra, nifanehatra tamin'ny mpanompon'i Davida. Ary nony efa niditra ny ampondra matevina eo ambanin'ny hazo terebinta sy ny lehibe, ny lohany nanjary voafandrika ao amin'ny hazo terebinta. Ary raha mbola mihantona teo anelanelan'ny lanitra sy ny tany, ny ampondra izay izy fa nipetraka foana tamin'ny.
18:10 Avy eo dia nisy anankiray nahita izany ka nilaza izany tamin'i Joaba, nanao hoe:, "Hitako mihantona Absaloma amin'ny hazo terebinta."
18:11 Ary hoy Joaba tamin'ilay lehilahy efa nilaza izany taminy, "Raha nahita azy, Nahoana no tsy manindrona azy ho any amin'ny tany, ary tsy maintsy ho nomeko sekely folo volafotsy sy fehin-kibo?"
18:12 Ary hoy izy tamin'i Joaba: "Na dia nolanjainy ny tanako vola madinika volafotsy arivo, Na oviana na oviana aho hametrahako tanana amin'ny zanaky ny mpanjaka. Fa teo anatrehanay nandidy ny mpanjaka anao sy Abisay ary Itahy, nanao hoe:, 'Tandremo ho ahy ny zaza Absaloma.'
18:13 Ary koa, raha efa nanao toy izany sahy, hanameloka ahy aho, fiainako, izany dia tsy ho afaka ho niafina tamin'ny mpanjaka. Ary ve ianao avy eo no nitsangana teo anilako?"
18:14 Ary hoy Joaba:, "Tsy ho araka izay irinao. Fa tsy, I ho assailing azy eo imasonao. "Avy eo izy dia nitondra lefona telo teny an-tanany, ka dia raikitra azy ao am-Absaloma. Ary raha mbola nihazona ny fiainana eo amin'ny hazo terebinta,
18:15 nisy tovolahy folo,, mpitondra fiadian'i Joaba, nihazakazaka ny, ary namely azy, dia namono azy.
18:16 Ary Joaba nitsoka ny anjomara, ary natao indray ny olona, fandrao hanenjika ny Isiraely amin'ny sidina, fa izy no vonona ny hamindranao fo ny vahoaka.
18:17 Dia nalain'ny olona Absaloma, ka natsipiny tao an-davaka lehibe anankiray tao anaty ala. Ary piled ny izaitsizy tokoa antontam-bato lehibe teo amboniny nanao. Fa ny Isiraely rehetra nandositra ho any ny trano rantsan-kazo.
18:18 Ary Absaloma efa natsangana ho an'ny tenany, fony Izy mbola velona, ny tsangambato, izay ao amin'ny Lohasahan'ny ny Mpanjaka. Fa hoy izy:, "Tsy manan-janakalahy, ary toy izao no ho ny fahatsiarovana ny anarako. "Ary niantso ny tsangambato eo amin'ny anarany. Ary izany dia antsoina hoe ny tànan'i Absaloma, mandraka androany.
18:19 Ary Ahimaza, , zanak'i Zadoka,, nanao hoe:, "Aho hiezaka sy tatitra ho any amin'ny mpanjaka, fa ny Tompo dia tanteraka ny fitsarana azy, eo an-tanan'ny fahavalony. "
18:20 Ary hoy Joaba taminy: "Ary tsy ho ny iraka amin'izany andro izany. Fa tsy, dia tatitra amin'ny andro hafa. Izaho tsy hety ho anao ny hanome ny tatitra amin'izao fotoana izao, satria ny zanaky ny mpanjaka dia maty. "
18:21 Ary hoy Joaba tamin'i Hosay, "Mandehana, ary hilaza amin'ny mpanjaka izay efa hitanao. "Hosay Joaba ka hajaina, ary dia nihazakazaka.
18:22 ary Ahimaza, , zanak'i Zadoka,, hoy izy tamin'i Joaba indray, "Inona no misakana ahy tsy avy mihazakazaka manaraka Hosay koa?"Ary hoy Joaba taminy: "Nahoana ianao no te-hihazakazaka, ny zanako lahy? Ianao tsy ho ny mpitondra ny vaovao tsara. "
18:23 Dia namaly, "Ahoana anefa raha mihazakazaka aho?"Ary hoy izy taminy:, "Mihazakazaha." Ary Ahimaza, mihazakazaka eny amin'ny fomba fohy, lasa Hosay.
18:24 Ary Davida nipetraka teo anelanelan'ny vavahady roa. Marina tokoa, ny mpitily, izay tany ny tampon'i ny vavahady ambonin'ny manda, nanopy ny masony, nahita misy lehilahy iray mihazakazaka.
18:25 Ary niantso, dia nilaza tamin'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka:, "Raha izy irery, misy vaovao tsara ao am-bavany. "Fa raha mbola nandroso sy mpitan-akaiky kokoa,
18:26 ny mpitily nahita lehilahy iray koa nihazakazaka. Ary noho izany, niantsoantso avy any amin'ny avo, hoy izy:: "Olona iray hafa no niseho, tamy mihazakazaka. "Ary hoy ny mpanjaka:, "Ity no tsara koa dia mpitondra hafatra."
18:27 Ary hoy ny mpitily:, "Ny mihazakazaka ny akaiky indrindra ny iray toa toy ny mihazakazaka ny Ahimaza, ny zanak'i Zadoka. "Ary hoy ny mpanjaka:, "Izy no iray tsara fanahy, ary tonga nitondra ny vaovao tsara. "
18:28 Avy eo, Ahimaza, niantso mafy, hoy izy tamin'ny mpanjaka, "Aoka ho tsara, Ry mpanjaka ô. "Ary ny mpanjaka fanehoana fanajana an mora tamin'ny tany teo anatrehany, hoy izy:, "Isaorana anie ny Tompo Andriamanitrareo, izay fonosina ny lehilahy izay efa nanandratra ny tànany hamely ny mpanjaka tompoko. "
18:29 Ary hoy ny mpanjaka:, "Fihavanana ny zaza Absaloma?"Ary hoy Ahimaza: "Izaho dia nandre tabataba be, Ry mpanjaka ô, rehefa Joaba mpanomponao naniraka ahy, mpanomponao. Fantatro na inona na inona hafa. "
18:30 Ary hoy ny mpanjaka taminy, "Pass, ka mijanòna etsy. "Ary rehefa nandeha ka nitoetra teo,
18:31 Hosay niseho. Ary manatona, hoy izy:: "Mijoro ho vaovao tsara, ny mpanjaka tompoko. Fa ankehitriny Jehovah efa nitsara anao, eo an-tanan'ny rehetra izay efa mitsangana hanohitra anao. "
18:32 Fa hoy ny mpanjaka tamin'i Hosay, "Fihavanana ny zaza Absaloma?"Ary mamaly, Hoy Hosay taminy, "Enga anie ny fahavalon'ny mpanjaka tompoko, sy izay rehetra hitsangana hamely azy Aho hahatonga loza, ho tahaka ny zaza izany. "
18:33 Ary toy izany ny mpanjaka, rehefa tena malahelo, niakatra tany amin'ny efitra ambony rihana ny vavahady, ary nitomany. Ary raha nandeha Jesosy, dia niteny toy izany: "Anaka Absaloma! Absaloma zanako! Iza no afaka manome ahy mba ho faty ny aminareo? Absaloma, ny zanako lahy! Ny zanako lahy, Absaloma!"
19:1 Ary nisy nilaza tamin'i Joaba ny mpanjaka fa nitomany sy nisaona ny zanany.
19:2 Ary toy izany ny fandresena tamin'izany andro izany dia tonga fisaonana ho an'ny vahoaka rehetra. Fa ny olona nandre dia nanao tamin'izany andro izany, "Ny mpanjaka no malahelo ny zanany."
19:3 Ary ny olona nandà tsy hiditra ny tanàna tamin'izany andro izany, amin'ny fomba izay nahazatra ny olona hivily raha toa ka efa nivily sy sisa ka nandositra avy tamin'ny ady.
19:4 Ary ny mpanjaka nanarona ny lohany, ka dia niantso tamin'ny feo mahery: "Ny zanako lahy, Absaloma! Absaloma, ny zanako lahy, ny zanako lahy!"
19:5 Noho izany, Joaba, miditra any amin'ny mpanjaka tao an-trano, nanao hoe:: "Androany no menatra ny tavan'ny mpanomponao rehetra, izay namonjy ny ainao, sy ny ain'ny zanakao-lahy sy ny zanakao-vavy, sy ny fiainan 'ny vadinareo, sy ny fiainan 'ny vaditsindranonao.
19:6 Ianareo izay mankahala anao, , fa halanao izay tia anao. Ary ianao efa nilaza androany fa tsy miahy ny mpitarika sy ho an'ny mpanomponao. Ary tena, Fantatro izao fa raha velona Absaloma, ary raha efa maty daholo, Avy eo dia ho sitraky anao.
19:7 Koa ankehitriny, Mitsangàna ary mankanesa any, ka lazao mba hanonitra ny mpanomponao. Fa mianiana ho anareo amin'ny Tompo fa raha tsy mivoaka, tsy olona na dia iray aza sisa no ho tavela aminao anio alina. Ary izany dia ho ratsy ho anao noho ny ratsy rehetra izay efa tonga atỳ aminao, hatry ny fahatanoranao hatramin'ny ankehitriny. "
19:8 Noho izany, ny mpanjaka nitsangana, ary nipetraka teo am-bavahady. Ary nisy nanambara tamin'ny olona rehetra fa ny mpanjaka nipetraka eo am-bavahady. Ary ny vahoaka rehetra dia nandeha teo anatrehan'ny mpanjaka. Fa ny Isiraely nandositra ho any an-trano rantsan-kazo.
19:9 Ary ny vahoaka rehetra dia nifanohitra, rehetra ny firenen'Isiraely, nanao hoe:: "Ny mpanjaka no nanafaka anay tamin'ny tanan'ny fahavalonay. Izy no namonjy anay tamin'ny tanan'ny Filistina. Fa ankehitriny Izy mandositra avy any amin'ny tany noho ny amin'i Absaloma.
19:10 Ary Absaloma, izay nohosorantsika hanjaka amintsika, dia maty tany an-tafika. Mandra-pahoviana no hangina, fa tsy hampiverina ny mpanjaka?"
19:11 Ary tena, Davida mpanjaka naniraka tany amin'i Zadoka sy Abiatara, ny mpisorona, nanao hoe:: "Mitenena amin'izay lehibe noho teraka Joda, nanao hoe:: 'Nahoana ianao no tonga farany mba hampiverina ny mpanjaka tao an-tranony? (Fa ny lahateny rehetra amin'ny Isiraely efa nahatratra ny mpanjaka tao an-tranony.)
19:12 Hianareo no rahalahiko; ianao Taolako sy nofoko. Nahoana no ho farany amin'ny hampiverina ny mpanjaka?'
19:13 Ary lazao amin'i Amasa: 'Ianao ve Tsy taolako sy nofoko? Enga anie Andriamanitra manao ireo zavatra ireo, ary enga anie izy manampy ireo zavatra hafa, raha tsy ho ny mpitarika ny miaramila eo imasoko, ho an'ny fotoana rehetra, eo amin'ny tany Joaba. ' "
19:14 Ary nitodika nitsinjo ny fon'ny lehilahy rehetra amin'ny Joda,, tahaka ny olona iray. Dia naniraka tany amin'ny mpanjaka, nanao hoe:, "Miverena, ianao sy ny mpanomponao rehetra. "
19:15 Ary ny mpanjaka niverina. Ary dia nandeha hatrany Jordana, ary ny Joda rehetra nandeha hatrany Gilgala, mba hitsena ny mpanjaka, ary mba hitarika azy ampitan'i Jordana.
19:16 ary Simey, ny zanak'i Gera, ny zanak'i Benjamina, avy any Bahorima, faingana ka nidina araka tamin'ny lehilahy amin'ny Joda tsena an'i Davida mpanjaka,
19:17 amin'ny iray arivo sy iray alina avy Benjamin, ary Ziba, ny mpanompony tsy an-tranon'i Saoly. Ary ny namany dia ny dimy ambin'ny folo sy mpanompo roa-polo lahy. Ary niakatra ho any an Jordana,
19:18 dia nita ny fitàna teo anatrehan'ny mpanjaka, ka mba hitarika manerana ny tranon'ny mpanjaka, ary mba manao zavatra araka ny mba. Avy eo, Simey, ny zanak'i Gera, niankohoka teo anatrehan'ny mpanjaka rehefa lasa izao ampitan'i Jordana,
19:19 hoy izy taminy:: "Enga anie ianao tsy hanome tsiny ahy, tompoko, ny heloka, na tsarovy ny ratra, ny mpanomponao amin'ny andro izay, ny mpanjaka tompoko, niala avy tany Jerosalema. Ary enga anie tsy hitahiry izany ao am-ponao, Ry mpanjaka ô.
19:20 Fa tahaka ny mpanomponao, I manaiky ny fahotako. Ary noho izany antony, amin'izao fotoana izao, I tonga tahaka ny voalohany avy ny taranak'i Josefa, ary nidina hitsena ny mpanjaka tompoko. "
19:21 Na izany aza tena, Abisay, , zanak'i Zeroia,, mamaly, nanao hoe:, "Tokony tsy Simey, noho izany teny izany, hovonoina, satria efa nanozona an'i Kristy 'ny Tompo?"
19:22 Ary hoy Davida: "Inona no akory izaho sy ianareo rehetra, Ry zanak'i Zeroia? Nahoana ianao no manao ahy izao andro tahaka i Satana? Nahoana no misy olona hovonoina ho faty anio teo amin'ny Isiraely? Moa tsy fantatrareo va fa anio no natao mpanjakan'ny Isiraely?"
19:23 Ary hoy ny mpanjaka tamin'i Simey, "Tsy ho faty ianao." Ary nianiana taminy.
19:24 ary Mefiboseta, ny zanak'i Saoly,, nidina hitsena ny mpanjaka, amin'ny tsy misasa ny tongony sy ny voavoatra volombava. Ary tsy nanasa ny fitafiany hatramin'ny andro ny mpanjaka efa lasa, mandra-pahatongan'ny andro niverenany soa aman-tsara.
19:25 Ary rehefa nihaona ny mpanjaka tany Jerosalema, hoy ny mpanjaka taminy, "Nahoana no tsy mba nandeha niaraka tamiko, Mefiboseta?"
19:26 Ary ho setrin'ny, hoy izy:: "Ry mpanjaka tompoko ô, mpanompoko nanamavo ahy. Sy izaho, mpanomponao, niteny taminy ka mba lasely ny boriky ho ahy, ary mba mananika aminy ka hankany amin'ny mpanjaka. Fa I, mpanomponao, isika lelany.
19:27 Koa, Izy koa niampanga ahy, mpanomponao, ho anao, ny mpanjaka tompoko. fa ianareo, ny mpanjaka tompoko, dia tahaka Ilay Anjelin'Andriamanitra. Ataovy izay mampifaly anao.
19:28 Fa ny taranaky ny raiko dia mendrika na inona na inona, fa ho faty teo anatrehan'ny mpanjaka tompoko. Nefa efa nametraka ahy, mpanomponao, teo anivon 'ny vahiny ny latabatra. Noho izany, Inona no mety ho fitarainana fotsiny aho? Na inona koa no mitaraina amin'ny mpanjaka?"
19:29 Dia hoy ny mpanjaka taminy: "Nahoana ianao no mbola miteny? Izay efa noresahiko tafatoetra. Ianao sy Ziba no hizara ny fananany. "
19:30 Ary Mefiboseta namaly ny mpanjaka, "Fa ankehitriny dia aoka hitondra azy rehetra, satria ny mpanjaka tompoko efa niverina tamim-pilaminana tao an-tranony. "
19:31 Toy izany koa, Barzilay Gileadita, nidina avy tany Rogelima, nitarika ny mpanjaka ampitan'i Jordana, dia vonona ihany koa ny hanara-dia azy an-dafin'ny ony.
19:32 Ary Barzilay Gileadita dia be antitra, izany hoe, valo-polo taona. Nizaha izay tsara hanina ny mpanjaka, raha nitoetra teo izy ny toby. Fa tokoa, dia ny lehilahy manan-karena fatratra tokoa izy.
19:33 Ary toy izany koa ny mpanjaka tamin'i Barzilay, "Avia hiaraka amiko, mba hitsahatra tsy manana ahiahy any amiko any Jerosalema. "
19:34 Ary hoy Barzilay tamin'ny mpanjaka: "Firy andro sisa ao an-taona maro teo amin'ny fiainako, no hiara-miakatra amin'ny mpanjaka ho any Jerosalema?
19:35 Androany aho valo-polo taona. Saina haingana no mamantatra mamy sy mangidy? Sa ny sakafo sy zava-pisotro afaka faly ny mpanomponao? Na no mbola mandre ny feon'ny lehilahy sy vehivavy mpihira? Nahoana ny mpanomponao no ho enta-mavesatra amin'ny mpanjaka tompoko?
19:36 I, mpanomponao, procede kely dia fomba avy any Jordana miaraka aminao. Izaho tsy mba mila valiny ity.
19:37 Fa mangataka aminareo fa I, mpanomponao, Mety ho niverina, ary mety ho faty eo amin'ny tanànany, ary mba halevina anilan'ny fasan-raiko sy ny reniko. Fa misy Kimama mpanomponao; aoka izy no handeha hiaraka aminao, ny mpanjaka tompoko. Ary ataovy ho azy izay sitrakao. "
19:38 Ary toy izany koa ny mpanjaka taminy: "Aoka Kimama hiampita miaraka amiko, ary hataoko ho azy na inona na inona ho mampifaly anao. Ary izay rehetra fanontaniany amiko, dia hahazo. "
19:39 Ary raha ny vahoaka rehetra sy ny mpanjaka tafita an'i Jordana, ny mpanjaka Barzilay nanoroka, Dia nitso-drano azy. Dia niverina ho any amin'ny fonenany.
19:40 Dia hoy ny mpanjaka nandroso nankany Gilgala, ary Kimama niaraka taminy. Ary ny vahoaka rehetra tamin'ny Joda, efa nitondra ny mpanjaka manerana, fa ny toy antsasaky ny fehin'i iray ny lehilahy amin'ny Isiraely teo.
19:41 Ary noho izany, ny lehilahy rehetra amin'ny Isiraely,, mihazakazaka ho any amin'ny mpanjaka, hoy izy taminy:: "Nahoana no ny rahalahintsika, ny lehilahy amin'ny Joda, nangalatra anao. Ary nahoana izy ireo no nitondra ny mpanjaka sy ny tranony ampitan'i Jordana, ary ny olon'i Davida taminy?"
19:42 Ary ny lehilahy rehetra amin'ny Joda dia namaly ny lehilahy amin'ny Isiraely: "Koa satria ny mpanjaka no akaikikaiky kokoa aho. Nahoana no tezitra ianao noho izany zavatra izany? Angaha ny sakafonay na inona na inona an'ny mpanjaka, na manana fanomezam-pahasoavana nomena antsika?"
19:43 Ary ny lehilahy amin'ny Isiraely namaly ny lehilahy amin'ny Joda,, ka nanao hoe:: "Manana ny vola lehibe, anjaram-polo, ny mpanjaka, ary toy izany koa i Davida an'ny amiko koa izany noho ny aminareo. Nahoana ianao no nahatonga ahy ny ratsy, ary nahoana no tsy nambara amiko aloha, ka mba hitarika indray ny mpanjakako?"Ary ny lehilahy amin'ny Joda dia namaly mafy kokoa noho ny lehilahy amin'ny Isiraely.
20:1 Ary nony fa nisy, amin'izany toerana, lehilahy tena ratsy fanahy, atao hoe Sheba, ny zanak'i Bikry, lehilahy avy amin'ny Benjamina. Dia nitsoka ny anjomara, ka hoy Izy:: "Tsy misy anjara ho antsika in David, na lova eo amin'ny zanak'i Jese. Miverena any amin'ny trano rantsan-kazo ny, Ry Isiraely ô. "
20:2 Ary ny Isiraely rehetra tafasaraka David, ka dia nanaraka Sheba, ny zanak'i Bikry. Fa ny lehilahy amin'ny Joda ny mpanjaka nifikitra, hatrany Jordana ka hatrany Jerosalema.
20:3 Ary nony efa niditra ny mpanjaka tao an-tranony tany Jerosalema, dia nalainy ny vaditsindranony folo vavy, izay navelany aoriana mba hikarakara ny trano, ka nataony an-tranomaizina izy ireo, mamela azy ireo vatsy. Fa tsy niditra tamin'izy ireo. Fa tsy, izy ireo fonosina, na dia ambara-pahatongan'ny andro ny fahafatesana, miaina toy ny mpitondra-.
20:4 Dia hoy ny mpanjaka tamin'i Amasa, "Antsoy amiko ny lehilahy rehetra amin'ny Joda, tamin'ny andro fahatelo, ary ianareo dia ho eo koa. "
20:5 Noho izany, Amasa lasa nandeha, ka mba hiantso ny Joda. Fa tara any an-dafin'ny nanaiky ny fotoana izay notendren'ny mpanjaka ho azy.
20:6 Ary hoy Davida tamin'i Abisay: "Ankehitriny izao dia Seba, ny zanak'i Bikry, Ka tsy hampahory antsika mihoatra izany noho Absaloma nanao. Noho izany, mandray ny mpanompon'ny tomponareo, ary hanenjika azy, raha tsy izany dia mety tanàna voaro mafy, ka ho afaka avy aminay. "
20:7 Ary noho izany, ny mponina tao dia niainga niaraka taminy, miaraka ny miaramila mpiambina andriana. Ary ny vatan-dehilahy nivoaka avy tany Jerosalema ireo hanenjika an'i Seba, ny zanak'i Bikry.
20:8 Ary raha mbola anilan'ny vato lehibe, izay any Gibeona, Amasa nitsena azy. Ary Joaba no nitafy akaiky-miendrika akanjo mitovy amin'ny halavan'ny ny akanjony. Ary ny tonian'ny ireo, dia nisikinany amin'ny sabatra mihantona nidina ho any ny feny, tao amin'ny scabbard, izay natao mba hahatonga ny sabatra azo esorina amin'ny kely indrindra mihetsika, ary avy eo dia hamely.
20:9 Ary hoy Joaba tamin'i Amasa, "Aoka ho tsara, rahalahiko. "Dia natao Amasa ny saokany tamin'ny tanany ankavanana, toy ny hoe hanoroka azy.
20:10 Fa Amasa tsy mahita ny sabatra fa Joaba efa. Ary namely azy teo amin'ny lafiny, ary ny tsinainy naidiny tamin'ny tany. Ary tsy ampitondraina faharoa ratra, dia maty izy. Ary Joaba sy Abisay rahalahiny nanenjika ny Sheba, ny zanak'i Bikry.
20:11 Mandritra izany fotoana izany, ny olona sasany, avy amin'ny orinasa Joaba, rehefa nijanona teo akaikin'ny fatin'i Amasa, nanao hoe:: "Indro, ny olona iray izay te ho any amin'ny tany Joaba, ny mpiara-mitory Davida. "
20:12 Ary Amasa dia rakotry ny ra, ary natory tao amin'ny afovoan-dàlana. Ary nisy lehilahy anankiray nahita izany, ny olona rehetra nijoro teo akaiky teo mba hijery azy, ary nifindra Amasa avy amin'ny lalana any an-tsaha. Dia norakofany lamba, ka dia izay tsy nandalo intsony noho ny azy.
20:13 Avy eo, rehefa efa niala an-dalana, nanohy ny lehilahy rehetra amin'ny, manaraka Joaba amin'ny fikatsahana Sheba, ny zanak'i Bikry.
20:14 Ary izy nandeha namaky ny firenen'Isiraely rehetra Isiraelita tao an Abela sy Bethmaacah. Ary ny olom-boafidy ny olona efa niangona teo aminy.
20:15 Ary noho izany, dia nandeha izy ka nanao fahirano azy teo Abela sy Bethmaacah. Ary nanodidina ny tanàna amin'ny fahirano asa, ary ny tanàna blockaded. Ary ny vahoaka rehetra izay nomba an'i Joaba dia niezaka ny horavan'ireo ny mandan'i.
20:16 Ary nisy vehivavy hendry tao an-tanàna Hoy: "Henoy, mihaino, ka lazao amin'i Joaba: manatona, fa hiteny aminao. "
20:17 Ary rehefa manakaiky azy, dia hoy izy taminy:, "Hianao va no Joaba?"Dia namaly, "Izaho no izy." Ary niteny toy izany ho azy, "Henoy ny tenin'ny mpanompovavinao." Hoy ny navaliny, "Mihaino aho."
20:18 Ary niteny indray izy: "Ny teny no voalaza ao amin'ny ohabolana taloha, 'Ireo izay ta-hanontany, aoka izy hanontany any Abela. 'koa araka izany ny ho tonga ny famaranana.
20:19 Aho tsy ilay mamaly amin'ny fahamarinana teo amin'ny Isiraely? Kanefa ianao no mikatsaka ny horavako io vohitra, ary ny handravana ho reny teo amin'ny Isiraely! Nahoana no mitanondrika ny lovan'i Jehovah?"
20:20 Sy ny fandraisana andraikitra, hoy Joaba:: "Enga anie izany ho lavitra, Mety izany manalavitra ahy! Enga anie tsy mitanondrika, ary enga anie aho tsy handrava.
20:21 Tsy izany tsy araka ny hoe:. kosa, misy lehilahy avy amin'ny tany havoan'i Efraima,, Sheba, ny zanak'i Bikry, amin'ny anarany, izay efa nanainga tànana hikomy amin'i Davida mpanjaka. Vonjeo izy ho, ary dia hiala avy any an-tanàna. "Ary hoy ravehivavy tamin'i Joaba, "Indro, ny lohany, dia horavana ho aminareo avy amin'ny manda. '
20:22 Noho izany, dia niditra tamin'ny olona rehetra, ary niteny taminy tamim-pahendrena. Dia notapahin'ireo ny lohan'i Sheba, ny zanak'i Bikry, ary natsipiny teo amin'i Joaba. Dia nitsoka ny anjomara, ary dia niala tany an-tanàna, samy ho any an-tranolainy. Ary Joaba niverina nankany Jerosalema ho any amin'ny mpanjaka.
20:23 Toy izany no Joaba, no mpifehy ny miaramilan'ny Isiraely rehetra. ary Benaia, ny zanak'i Joiada, no mpifehy ny Cerethites sy Phelethites.
20:24 Na izany aza tena, Adorama no komandin'ny mpanao fanomezam-boninahitra. ary Josafata, ny zanak'i Ahiloda, no mpiandry ny rakitsoratra.
20:25 Ary Seva no mpanoratra. Ary tena Zadoka sy Abiatara no mpisorona.
20:26 fa Ira, ny Jairites, dia mpisoron'Andriamanitra David.
21:1 Ary nisy mosary nitranga, nandritra ny andron'i Davida, nandritra ny telo taona hatrany. Ary Davida niara-nihevitra ny efitra anatiny 'ny Tompo. Ary hoy ny Tompo:: "Izany no izy satria Saoly, sy ny taranany mpandatsa-dra. Fa izy namono ny Gibeonita. "
21:2 Noho izany, ny mpanjaka, miantso ny Gibeonita, niteny taminy. Ary ny Gibeonita tsy mba isan'ny taranak'i Israely, fa dia ny sisa tamin'ny Amorita. Ary ny zanakalahin'i amin'ny Isiraely efa nianiana nianiana tamin'izy ireo, fa Saoly te hamely azy ireo amin'ny zotom-po, toy ny hiaro ny zanaky ny Isiraely sy ny Joda.
21:3 Noho izany, Hoy Davida tamin'ny Gibeonita: "Inona no hataoko ho anareo? Ary inona no ho fahafaham-po, mba hitsofanareo rano ny lovan'i Jehovah?"
21:4 Dia hoy ny Gibeonita taminy: "Tsy misy mifanditra ho antsika ny volafotsy na volamena, fa tamin'i Saoly sy ny taranany. Ary tsy misy olona maniry ny Isiraely hatao maty. "Ary hoy ny mpanjaka taminy, "Dia inona no tianao hataoko ho anao?"
21:5 Dia hoy izy ireo tamin'ny mpanjaka: "Ny olona izay tsy ara-drariny ory sy nampahory anay, tokony hanimba izany zavatra izany na dia iray aza fa tsy ny tahiry dia mety ho tavela any amin'ny faritra rehetra amin'ny Isiraely.
21:6 Avelao hisy fito lahy amin'ny zanany homena antsika, ka mba hazofijaliana azy ho an'ny Tompo tany Gibeona Saoly, teo aloha ny toerana voafidy 'ny Tompo. "Ary hoy ny mpanjaka:, "Izaho no homena azy."
21:7 Fa ny mpanjaka niaro an'i Mefiboseta, ny zanak'i Jonatana, ny zanak'i Saoly,, noho ny fianianana tamin'i Jehovah izay efa nataony Davida sy Jonatana, ny zanak'i Saoly,.
21:8 Ary toy izany ny mpanjaka naka azy roa lahy, zanak'i Rizpa, ny zanakavavin'i Aia, izay naterany tamin'i Saoly, Armony sy Mefiboseta, ary ny dimy lahy zanak'i Mikala, ny zanakavavin'i Saoly, izay nanan'anaka ny Adriela, ny zanak'i Barzilay, avy any Meholath,
21:9 ka dia natolony teo an-tànan'ny Gibeonita. Nanomboany tamin'ny hazo fijaliana teo amin'ny havoana iray eo imason'i Jehovah. Ary ireo latsaka fito niara amin'ny andro voalohany ny vokatra, rehefa manomboka ny vary hordea tokony voajinja.
21:10 Ary Rizpa, ny zanakavavin'i Aia, mandray ny lamba fisaonana, novelariny teo ambanin'ny tenany teo ambonin'ny vatolampy, hatrany am-piandohana ny taom-pijinjana ny rano mandra-nilatsaka avy tany an-danitra azy ireo. Ary izy tsy namela ny vorona hamiravira ireo raha antoandro, na ny biby alina.
21:11 Ary nisy nilaza tamin'i Davida izay nataon'i Rizpa, ny zanakavavin'i Aia, vaditsindranon'i Saoly, nanao.
21:12 Dia lasa Davida naka ny taolan'i Saoly, sy ny taolan'i Jonatana zanany, avy amin'ny mponina ao Jabesi-gileada, izay nangalatra azy tao an-kalalahana any Beti-sana, izay efa nahantona ny Filistina ireny, rehefa efa novonoiny an'i Saoly tao Gilboa.
21:13 Ary nentiny nanatona koa ny taolan'i Saoly, sy ny taolan'i Jonatana zanany, avy any. Ary nanangona ny taolan'i ireo izay efa nohomboana tamin'ny hazo fijaliana.
21:14 Dia naleviny tao amin'ny taolan'i Saoly sy Jonatana zanany, ao amin'ny tanin'ny Benjamina,, hatramin'ny ilany amin'ny fasan-drainy Kisy. Dia nataon'ny mpanjaka izay rehetra efa nampianatra. Ary rehefa afaka izany,, Andriamanitra naneho fitia indray ho any amin'ny tany.
21:15 Ary hoy ny Filistina indray nanaiky ny hiady amin'ny Isiraely. Ary Davida dia nidina, sy ny mpanompony izay nanaraka azy, dia niady tamin'ny Filistina. Fa rehefa nitombo David reraka,
21:16 Ishbibenob, izay avy amin'ny razambeny ny Arapha, ny vy lefony telon-jato ounces, izay efa nisalotra sabatra vaovao, niezaka mba hanafika David.
21:17 ary Abisay, , zanak'i Zeroia,, niaro azy, ary namono ilay Filistina, dia namono azy. Dia hoy ny olon'i Davida nianiana taminy, nanao hoe:, "Ary tsy handeha an-tafika aminay, fandrao hamono ny fahazavan'ny Isiraely. "
21:18 koa, faharoa ady nitranga tao Goba tamin'ny Filistina. Sy Sibekay avy any Hosa Dia namely an'i Safa, avy amin'ny fototr'isiraely Arapha, ny razambeny ny Refaita.
21:19 Ary nisy ady tany Goba fahatelo tamin'ny Filistina, izay Elanana, ny zanaky ny ala, mpanenona avy any Betlehema, namono an'i Goliata Gatita, ny lavaka lefony dia toy ny andry ampiasain'ny mpanao lamba.
21:20 Ny fahefatra ady tao Gata. Amin'izany toerana, nisy lehilahy avo, izay nanana isa enina eo amin'ny tanana tsirairay sy ny tongotra tsirairay, izany hoe, efatra amby roa-polo amin'ny rehetra, ary izy dia hatramin'ny am-boalohany ny Arapha.
21:21 Ary niteny ratsy ny Isiraely. Ary Jonatana, ny zanak'i Simey, ny rahalahin'i Davida, namono azy.
21:22 Ireo efatra ireo no teraky ny lehilahy tao Gata Arapha, ka matin'ny tànan'i Davida sy ny mpanompony.
22:1 Ary hoy Davida tamin'ny an'i Jehovah ny tenin 'ity andininy, tamin'ny andro ny Tompo nanafaka azy tamin'ny tanan'ny fahavalony rehetra sy tamin'ny tànan'i Saoly,.
22:2 Ary hoy izy:: "Jehovah no harambatoko, sy ny hery, sy ny Mpamonjy.
22:3 Izaho kosa dia hanantena Azy. Izany Andriamanitra izany no matanjaka, ampingako, ary ny tandroka famonjena. Manainga ahy, ary izy no famelombelomana. Ianao, Ny Mpamonjy ahy, no hanafaka ahy amin'ny ratsy.
22:4 Dia miantso ny Tompo, izay mendri-piderana; ary Izaho no ho vonjena ho afaka amin'ny fahavaloko.
22:5 Fa ny fanaintainan'ny fahafatesana no manodidina ahy. Ny renirano tena ratsy fanahy no mampangovitra ahy.
22:6 Ny tady ny helo no nanodidina ahy. Ny fandriky ny fahafatesana no intercepted ahy.
22:7 Araka ny fahoriana, Dia miantso ny Tompo, ary hitaraina amin'i Andriamanitro. Ary dia hihaino ny feoko tao an-tempoliny, ary ny fitarainana dia hahatratra ny sofiny.
22:8 Dia nihozongozona ny tany, Ary nihorohoro. Ary ny fanambanin'ny tendrombohitra miaraka ary dia namely mafy hozongozonina, satria tezitra aminy.
22:9 Niakatra ny setroka avy vavorony, sy afo, avy amin'ny vavany no handringanana; vainafo no nirehitra teo aminy.
22:10 Dia niondrika ny lanitra, ary izany dia nidina; ary nisy zavona teo ambany tongony.
22:11 Dia niakatra teo amin'ny kerobima, ary nanidina; ary Nikisakisaka teo amin'ny ela-drivotra Izy.
22:12 Ary nasiany maizina ho toy ny fierena manodidina ny tenany, amin'ny rano voasivana avy amin'ny rahon'ny lanitra.
22:13 Amin'ny alalan'ny amin'ny famirapiratana teo jerena, vainafo nidedadeda.
22:14 Ny Tompo no hampikotrokorana avy any an-danitra; ary ny Avo Indrindra no hanandratra ny feony.
22:15 Izy nitifitra zana-tsipìka, ka nampiely ny fahavaloko; tselatra, ka nandevona azy ireo.
22:16 Ary ny vokatra any an-dranomasina niseho, ary ny fototry ny izao tontolo izao dia nambara, amin'ny ny teny mafy ny Tompo, amin'ny voateliko ny fofonain'ny fahatezerany.
22:17 Naninjitra ny tanany avy any ambony, ary Izy ka nandray ahy. Ary nanintona ahy niala tamin'ny rano be.
22:18 Dia novahanao ny fahavalo mahery indrindra sy ireo izay efa nankahala ahy. Fa ireo dia nahery noho ny amiko.
22:19 Dia nandeha nialoha ahy tamin'ny andro fahoriako, ary ny Tompo dia tonga ny habakabaka.
22:20 Dia nitondra ahy ho afaka ho any amin'ny malalaka-kalalahana. Ary nanafaka ahy, satria aho mampifaly azy.
22:21 Jehovah no hamaly soa ahy araka ny rariny. Dia hamaly ahy araka ny fahadiovan'ny tanako.
22:22 Fa nitandrina ny lalan 'ny Tompo, ary tsy nanao impiously eo anatrehan'ny Andriamanitro.
22:23 Ny fitsipiny rehetra dia eo imasoko. Ary efa tsy mba noravana ny didinao tamiko.
22:24 Dia ho tanteraka aminy. Ary hiaro tena tsy ho azon'ny helony.
22:25 Ary ny Tompo dia hamaly ahy araka ny rariny, ary araka ny fahadiovan'ny tanako eo amin'ny hitan'ny masony.
22:26 Amin'ny Fanahy iray, dia ho masina, sy ny matanjaka, ianao dia ho tonga lafatra.
22:27 Noho ny olom-boafidy iray, ianao dia ho olom-boafidy, sy ny maditra iray, ianao dia ho efa nivadika.
22:28 Ary ianao no hitondra ho amin'ny famonjena ny olona mahantra, dia ho hanetry ny nasandratra amin'ny masonao.
22:29 Fa Hianao no jiroko, Tompo O. Ary ianao, Tompo O, no hanazava ny haizina.
22:30 Fa ianao, Aho hiezaka misikina. Amin 'Andriamanitra aho, No ahazoako mitsambikina mihoatra ny manda.
22:31 Andriamanitra, ny lalany no immaculate; ny fahaiza-miteny ny Tompo dia sarotiny afo. Izy no ampinga rehetra izay manantena azy.
22:32 Iza no Andriamanitra afa-tsy ny Tompo? Ary iza no mahery afa-tsy Andriamanitsika?
22:33 Andriamanitra, efa mampisikina ahy herimpo, ary nataony alehako:
22:34 manao ny tongotro ho tahaka ny tongotry ny serfa, ary Mijoro ahy eo amin'ny toerana ambony,
22:35 Mampianatra ny tanako hanao ady, sy ny fanaovana ny sandriny ireny tahaka ny tsipìka varahina.
22:36 Omenao ahy ny ampingan'ny famonjenao. Ary ny fahalemem-panahy efa nahamaro ahy.
22:37 Dia hampitombo ny diako hanoa ahy, sy ny kitrokeliny dia tsy ho levona.
22:38 I Manenjika ny fahavaloko, ka hanorotoro azy. Ary dia tsy havelako indray, mandra-haringako izy.
22:39 Dia haringako izy ka hivadika izy ireo masina, ka tsy mahazo mitsangana eto; dia ho lavo eo ambanin'ny tongotro izy.
22:40 Efa mampisikina ahy hery hiady. Ireo izay nanohitra ahy, ianao nanenjana teo ambaniko.
22:41 Efa nahatonga ny fahavaloko mba hitodika ny niverina tamiko; izy ireo fankahalana ho ahy, ary fandringanana amin'ny tenany.
22:42 Ireo no hitomany avy, ary tsy hisy olona hamonjy; ho an'ny Tompo, dia tsy hihaino azy ireo.
22:43 Dia namaoka azy intsony tahaka ny vovo-tany. Hotapahiko azy masina sy hanorotoro azy, toy ny fotaka eny an-dalambe.
22:44 Ianao no hamonjy ahy amin'ny fifanoheran-kevitra ny oloko. Ianao hamonjy ahy ho lohan'ny jentilisa; ny firenena tsy fantatro aza dia manompo ahy.
22:45 Ary ny zanakalahin'i hafa firenena, Iza no manohitra ahy, amin'ny Fandrenesan'ny sofina dia hankatò ahy.
22:46 Ny hafa firenena lasa nikoriana, fa dia ho voasariky miaraka amin'ny anguishes.
22:47 Velona koa Jehovah, ary Andriamanitro no sambatra. Ary ny mahery Andriamanitry ny famonjena ahy no hasandratra.
22:48 Andriamanitra dia manome ahy ny fanamarinana, ary manetry ny firenena ahy.
22:49 Mitarika ahy amin'ny fahavaloko, Ary manandratra ahy ho afaka amin'ireo mahatohitra ahy. Ho hanafaka ahy amin'ny iniquitous lehilahy.
22:50 Noho io, No hiderako anao, Tompo O, any amin'ny jentilisa, ary Hihira ny anaranao:
22:51 nankalaza ny famonjena ny mpanjaka, nefa kosa mamindra fo tamin'i Davida, ny Kristy, sy ny taranany mandrakizay. "
23:1 Ary izao no teny farany nataon'i Davida. Ary Davida, ny zanak'i Jese, ny lehilahy izay dia voatendry ny amin'ny Kristy ho an'ny Andriamanitr'i Jakôba, ny lehibe indrindra mpanao salamo amin'ny Isiraely::
23:2 "Ny Fanahin 'ny Tompo no efa niteny alalako, ary ny teniny no nampilazaina lelako.
23:3 Andriamanitry ny Isiraely, tamiko, ny Strong Iray Isiraely niteny, ny Mpanapaka ny olona, Marina Mpitondra, ao amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra,
23:4 tahaka ilay fahazavan'ny maraina tahaka ny masoandro miakatra, raha ilay maraina tsy misy rahona glows mena, ary toy ny zavamaniry mitsimoka avy amin'ny tany, samy araka ny rotsakorana.
23:5 Fa ny trano tsy dia lehibe amin'Andriamanitra mba hiandraikitra ny fanekena amiko mandrakizay, mafy sy ny mimanda ny zava-drehetra. Fa Izy no manontolo ny famonjena ahy sy ny manontolo ny ny sitrapoko. Ary tsy misy na inona na inona izany, izay tsy mitsiry.
23:6 Fa prevaricators rehetra dia nosarihana toy ny tsilo, Kanefa ireo dia tsy mba noravana-tanana.
23:7 Ary raha misy te hametrahany tanana;, dia tsy maintsy mitondra vy sy hazo lefona. Ary ho nandoro ka nandoro ny na inona na inona. "
23:8 Ary izao no anaran'ny mahery Davida. Nipetraka teo amin'ny seza nisy ny mpitarika hendry indrindra eo amin'ny telo; dia tahaka ny tena fitiavana kankana kely amin'ny hazo, izay namono valon-jato lahy miray fanafihana.
23:9 Manarakaraka ireo dia, nisy Eleazara, ny zanaky ny ray dadatoany, Ahohita, izay isan'ny lehilahy mahery telo izay tao amin'i Davida, fony izy ireo, nofaizana ny Filistina, ka dia niangona tany ady misy.
23:10 Ary nony hitan'ny lehilahy amin'ny Isiraely efa niakatra, dia nitsangana haingana izy ka namely ny Filistina, nitombo mandra-tànany malemy sy henjana tamin'ny sabatra. Ary Jehovah nanao famonjena lehibe tamin'izany andro izany. Ary ny olona izay efa nandositra niverina hampakatra ny babo ny voavono.
23:11 Ary ny manarakaraka azy, nisy Sama, ny zanak'i Age, from Hara. Ary ny Filistina nivory tao amin'ny toby. Fa ny saha feno masaka tao amin'io toerana io. Ary rehefa ny olona tamin'izy nandositra niala teo anoloan'ny Filistina,
23:12 dia nitoetra mafy izany eo afovoan'ny an-tsaha, Ary dia arovan'ny azy. Ary namely ny Filistina. Ary Jehovah nahavita famonjena lehibe.
23:13 ary koa, talohan'izany, ny telo izay mpitarika teo amin'ny telo-polo nidina dia nankany amin'i Davida amin'ny taom-pijinjana, tao amin'ny zohin'i Adolama. Fa ny tobin'ny Filistina dia napetraka tao amin'ny Lohasahan'ny Refaita.
23:14 Ary Davida dia tao amin'ny batery fiarovana. Koa, nisy miaramilan'ny Filistina tamin'izany andro izany any Betlehema.
23:15 Ary Davida naniry, ka hoy Izy:, "Raha misy olona ihany no manome ahy hisotro ny rano avy ao amin'ny lavaka fanangonan-drano, izay any Betlehema afa-tsy ny vavahady!"
23:16 Noho izany, ny lehilahy mahery telo vaky tao an-toby ny Filistina, ary nanovo rano avy amin'ny famorian-drano ao Betlehema, izay teo anilan'ny vavahady. Ary dia nentiny ho any amin'i Davida. Nefa tsy nety nisotro; fa tsy, dia naidiny ho an'i Jehovah,
23:17 nanao hoe:: "Enga anie ny Tompo mamindrà fo amiko, ka dia tsy azoko ekena izany. Tokony hisotro ny ran'ireto olona izay efa niainga ho any dia mampidi-doza ny ainy?"Koa, dia tsy nety nisotro. Izany zavatra izany dia vita amin'ny alalan'ny lehilahy matanjaka telo ireo.
23:18 Ary Abisay, , rahalahin'i Joaba,, , zanak'i Zeroia,, no voalohany teo amin'ny telo. Izy no nanandratra ny lefona hanohitra ny telo-jato lahy, izay novonoiny. Ary Izy nalaza teo amin'ny telo,
23:19 ary izy no ambony tamin'izy telo lahy, ary izy no mpitondra azy ireo. Fa tamin'ny voalohany dia tsy nahomby azy telo lahy.
23:20 ary Benaia, ny zanak'i Joiada, tena mahery be asa, dia hatrany Kabzela. Dia namono ny liona roa Moaba, ka dia nidina ka namono ny liona tao afovoan'ny-davaky, tamin'ny andron'i oram-panala.
23:21 Izy koa no namono ilay Egyptiana, izay nanana lefona teny an-tànany, olona mendrika ny mijery. Na izany aza anefa dia efa nidina ho azy afa-tsy tehina. Ary nanery ny lefona eo an-tanan'ny Ejipsiana, ary izy namono azy iny lefony iny ihany.
23:22 Benaia, ny zanak'i Joiada, vita izany zavatra izany.
23:23 Ary Izy nalaza teo anivon 'ny telo lahy matanjaka, izay tsara indrindra eo amin'ny telo-polo. Na izany aza tena, tsy nahomby azy telo lahy, mandra-pahatongan'ny Davida nanao azy ny heviny mpanolotsaina.
23:24 Anisan'ireo telo-polo ireo: Asahela, , rahalahin'i Joaba,, sy Elanana, ny zanaky ny ray dadatoany, avy any Betlehema,
23:25 Sama avy any Haroda, Elika avy any Haroda,
23:26 Haleza avy any Palty, Ira, ny zanak'i Ikkesh, avy any Tekoa,
23:27 Abiezera avy any Anatota, Mebonay avy any Hosa,
23:28 Zalmona Ahohita, Sy Maharay Netofatita,
23:29 Aleppo, ny zanak'i Bana, ihany koa ny tenany ho Netofatita, Itahy, , zanak'i Ribay,, avy any Gibea, ny avy tamin'ny taranak'i Benjamina,
23:30 Benaia Piratonita, Hiddai avy ao amin'ny Torrent Gasa,
23:31 Abi-albona Arbatita, Azmaveta avy any Beromi,
23:32 Eliaba avy any Shaalbon; tamin'ny zanak'i Jasena, Jonathan,
23:33 Sama avy any Orori, sy Ahiama, ny zanak'i Sarara, Hararita,
23:34 Elifeleta, ny zanak'i Ahasbay, ny zanak'i Maacath, Elias;, ny zanak'i Ahitofela, Gilonita,
23:35 Hezray avy any Karmela, Paray from Arbi,
23:36 tsirairay, ny zanak'i Natana,, avy any Zoba, Bani from Gad,
23:37 Sy Zaleta from Amona, Naharay Berotita, mpitondra ny fiadian'i Joaba, , zanak'i Zeroia,,
23:38 Ira Jitrita, Gareba Jitrita koa,
23:39 Oria Hetita: fito amby telo-polo tanteraka
24:1 Ary ny fahatezeran'i Jehovah nirehitra indray tamin'ny Isiraely, Ary nampitaitra Davida teo aminy, nanao hoe:: "Mandehana, isao ny Isiraely sy ny Joda. "
24:2 Ary hoy ny mpanjaka tamin'i Joaba, ny mpitarika ny miaramilany, "Namakivaky ny foko rehetran'ny Israely, hatrany Dana ka hatrany Beri-sheba, ary alaminonareo ny vahoaka, ka mba ho fantatro ny isany. "
24:3 Ary hoy Joaba amin'ny mpanjaka: "Enga anie ny Tompo Andriamanitrao mampitombo ny olona, izay efa maro be, ary enga anie Izy indray hampitombo azy, ny iray zato heny, eo imason'ny mpanjaka tompoko. Inona anefa no mpanjaka tompoko mikasa ho an'ny tenany izany karazana zavatra?"
24:4 Fa ny tenin'ny mpanjaka naharesy ny tenin 'i Joaba sy ny mpitarika ny tafika. Ary Ary Joaba sy ny mpitarika ny miaramila niala ny tavan'ny mpanjaka, mba hahafahan'izy ireo handamina ny lehilahy amin'ny Isiraely.
24:5 Ary rehefa nandeha ampitan'i Jordana, dia tonga tao Aroera, ho amin'ny tsara tao an-tanàna, izay eo amin'ny lohasahan'ny Gada.
24:6 Ary izy ireo tamin'ny alalan'ny Jazera, ho any Gileada, ary ho any ambanin'ny tany Hodsi. Dia tonga tany an'ala Dana. Ary nony manodidina afa-tsy Sidona,
24:7 dia nandeha akaikin'ny mandan'i Tyro, ary akaiky ny tany rehetra ny Hivita sy ny Kananita. Ary niditra tao amin'ny atsimo izay an'ny Joda, ho any Beri-sheba.
24:8 Ary rehefa nizaha ny tany manontolo, rehefa afaka sivy volana sy roa-polo andro, izy ireo tany Jerosalema.
24:9 Ary Joaba nanome ny isan'ny famaritana 'ny vahoaka ho any amin'ny mpanjaka. Ary hita ny Isiraely valo hetsy ny vatan-dehilahy, izay mety nanatsoaka ny sabatra; ary Joda, dimy hetsy ny lehilahy miady.
24:10 Dia am-pon'i Davida namely azy, rehefa voalamina ny olona. Ary hoy Davida tamin'ny Tompo: "Efa nanota indrindra izay nataoko. Fa mivavaha,, Tompo O, hampialany ny heloky ny mpanomponao. Fa efa nanao fahadalana lehibe. "
24:11 Ary Davida nifoha maraina, ary ny tenin 'ny Tompo nankany Gada, ny mpaminany sy ny mpahita Davida, nanao hoe::
24:12 "Mandehana, ka lazao amin'i Davida: 'Izao no lazain'i Jehovah: Aho manolotra ho anareo ny safidy ny zavatra telo. Mifidiana iray amin'ireo, handefasana tianareo, ka dia hataoko ho anao. ' "
24:13 Ary nony efa lasa nandeha Gada tamin'i Davida, dia nanambara izany taminy, nanao hoe:: "Na fito taona mosarena ho tonga aminao eo amin'ny taninareo; na dia handositra nandritra ny telo volana avy amin'ny mpanohitra, ka hanenjika anao; na dia hisy areti-mandringana eo amin'ny taninareo nandritra ny telo andro. Koa ankehitriny, niniana, ary jereo izay teny mba hamaly Izay naniraka Ahy. "
24:14 Dia hoy Davida tamin'i Gada: "Izaho mafy ny fahoriam. Fa tsara kokoa dia ny hianjera eo an-tanan 'ny Tompo (ny famindram-po maro) noho ny eo an-tànan'ny olona. "
24:15 Ary Jehovah areti-mandringana ny Isiraely,, hatramin'ny maraina ka hatramin'ny fotoana voatondro. Ary nisy maty ny olona, hatrany Dana ka hatrany Beri-sheba, fito alina.
24:16 Ary rehefa lasa ny anjely 'ny Tompo efa mivelatra ny tànany eo ambonin'ny Jerosalema, ka mba handrava azy, ny Tompo dia onena ny alahelon'ny. Ary hoy izy tamin'ilay anjely namono ny olona: "Fa ampy. Misalasala ny tananao ankehitriny. "Ary Ilay Anjelin'i Jehovah dia teo anilan'ny famoloan'i Araona Jebosita.
24:17 Ary nony efa nahita ilay Anjely nanapaka ny firenena, Ary hoy Davida tamin'ny Tompo: "Izaho no nanota. Izaho efa nanao iniquitously. Ireo olona izay ny ondry, inona moa no mba nataony? Mifona aminao aho fa ny tananao mba ho mivadika ho fahavaloko sy manohitra an-tranon'ny raiko. "
24:18 Ary Gada nankany amin'i Davida tamin'izany andro izany, ka hoy Izy:, "Niakatra ary hanorina alitara ho an'i Jehovah ao amin'ny famoloan'i Araona Jebosita."
24:19 Ary niakatra i Davida araka ny tenin'i Gada, izay nandidian'i Jehovah azy.
24:20 Ary mitazana eo, Nitsinjo Araona tamin'ny mpanjaka sy ny mpanompony, nandalo manatona azy.
24:21 Ary nivoaka, dia niankohoka ny mpanjaka, ny lainga mora ny niankohoka tamin'ny tany, ka hoy Izy:, "Inona no antony fa ny mpanjaka tompoko efa atỳ amin'ny mpanompony?"Ary hoy Davida taminy:, "Mba hividy ny am-pamoloana avy aminao, ary mba hanorenako alitara ho an'i Jehovah, ary nampangina ny areti-mandringana izay mirongatra teo amin'ny vahoaka. "
24:22 Ary hoy Araona tamin'i Davida: "Enga anie ny mpanjaka tompoko tolotra ary raiso izay mampifaly azy. Efa omby ho fanatitra dorana, Ary ny sariety sy ny zioga ny omby ampiasaina amin'ny hazo. "
24:23 Izany rehetra izany dia nanome Araona, toy ny mpanjaka ny mpanjaka. Ary hoy Araona tamin'ny mpanjaka, "Enga anie ny TOMPO Andriamanitrao anie hankasitraka ny voady."
24:24 Ary ho setrin'ny, hoy ny mpanjaka taminy: "Fa tsy mba ho araka izay irinao. Fa tsy, Dia mividy ho afaka aminao amin'izay vidiny. Fa tsy hanatitra ho an'i Jehovah, Andriamanitra ô, dorana izay nampisy fiantraikany na inona na inona. "Noho izany, Novidin'i Davida ny famoloana sy ny omby noho ny dimam-polo sekely volafotsy.
24:25 Ary amin'izany toerana, I Davida nanao alitara teo ho an'i Jehovah. Ary nanatitra sorona dorana sy fanati-pihavanana. Ary Jehovah dia hamindra fo amin'ny tany, ary ny areti-mandringana natao amin'ny Isiraely niverina.